October 2014 | ကမ်းလက်
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/31/2014 - No comments
ခေတ်ဟောင်းထဲမှာ ဆရာကြီး ဦးသော်ဇင်ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံကျော်ပဲ။
ခေတ်သစ်ထဲမှာ နိုင်ငံကျော်တေးရေးဆရာ သော်ဒီဝေ ရှိတယ်။ ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတွေပါ။
အခု ဇင်ဝေသော်(အထက်က နာမည်နှစ်ခုအပြင် မရောက်ဘူး) လုပ်လိုက်တော့ နာမည်က မိန်းကလေးဆန်လိုက်တာလို့ ပြောကြတယ်(တချို့ပါ)။
"သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်" လို့ ပြောလိုက်ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ မသိ။
in ဇင်ဝေသော်, ဆောင်းပါး - on 10/31/2014 - No comments
ကြာပါပြီ၊ ဖတ်ဖူးတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ ဂျပန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နိုဘယ်ဆုရတော့ ငါတို့ လည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ပြီဆိုပြီး ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားလို့မဆုံး ဖြစ်နေချိန်မှာ ဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ငိုရမလို ရယ် ရမလို ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ သူပြောတာက
"အမေရိကတက္ကသိုလ်မှာ ပညာ သင်ခွင့်၊ သုတေသနပြုခွင့်မရရှိခဲ့ရင် ဒီဆုကို ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး" တဲ့။
သူအမွှမ်းတင်သွားတာက အမေရိကလူ့အဖွှဲ့အစည်းရဲ့ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ် ဇင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အိမ်မက်နောက်လိုက်မှုကို လေးစားခြင်း၊ နား လည်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်းစတာတွေပါ။ အာရှက အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကို တန်ဖိုးထား လေးစားမှုနည်းသလို တစ်ခုခု ကြိုးစားလုပ်နေ ရင်း တော်တော်နဲ့ဖြစ်မလာရင် စိတ်မရှည်၊ အပြစ်တင်၊ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုတွေတောင် ရှိတတ်တယ်။ အမေရိကမှာ ဒါမျိုးတွေ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။
အခု ပန်းသီးစီအီးအိုက သူဟာ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ် လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အာရှမှာဆို အကြီးအကျယ်ဂယက်ရိုက်သွားနိုင်ပေမဲ့ အမေရိကမှာတော့ သတင်းထူးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတာကလွဲလို့ ဘာမှ ထူးခြားမယ့် သဘောမရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်ကျမသွားရင် ကုမ္ပဏီနဲ့သူ့ရဲ့အနေ အထားကလည်း အရင်လိုပဲနေမှာပါ။ ဒါက အနောက်ရဲ့ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင် အကျိုးဆက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကရွေးချယ်မှုနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝကို သီးသန့် ထား၊ လေးစားပေးနိုင်မှုပါ။
လက်ခံချင်ရင်ခံ မခံချင်ရင်နေ သူတို့က ဒီအတိုင်းပဲရှိနေမှာဖြစ်သလို အိုင်းစတိုင်း က အစ ဘီးလ်ဂိတ်တို့ မာ့က်တိုအဆုံး တကယ့်လူတွေကို မွေးထုတ်လိုက်တာ ကလည်း ဒီ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ကပါပဲ။
အာရှမှာ လီကွမ်းယုကအစ ကော်လက်တစ်ဗစ်ဇင် (သမဂ္ဂဝါဒ) ကို ကြွေးကြော်တယ်။ ဒီတော့ အုပ်စုအားပြုကြတယ်။ အုပ်စုဖွဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟို တစ်ယောက်ကလုပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံး ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေရှိသလို ဟို တစ်ယောက်ရဲ့ တီထွင်မှုကို အုပ်စုလိုက် အသေအလဲ လိုက်ယူနေရတာတွေ လည်း ရှိနေပြန်တယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီနေ့အထိ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင် က ရှေ့ကပြေးနေဆဲဆိုတာပါပဲ။ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အန္တရာယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင် အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ရဲ့ အသီးအပွင့်ကို စားသုံးနေကြရဆဲသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို အနောက်ခံယူထားတဲ့ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာဖြစ်နေ မလဲ။
အရှေ့ရဲ့ ကော်လက်တစ်ဗစ်ဇင် (သမဂ္ဂဝါဒ) အဓိပ္ပါယ်က ဘာဖြစ်နေမလဲ။
နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး အတွက် စာအုပ်အလှူရှင်များ
in စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ, ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ - on 10/30/2014 - No comments
အလှူရှင်များဆိုပေမဲ့ နာမည်မထည့်ပါနဲ့ဆိုသူရယ်၊ ဒီနာမည်လေးနဲ့သာ ထည့်ပေး ပါဆိုသူရယ်တွေကြောင့် ဖော်ပြပေးစရာလည်း သိပ်မရှိတော့ပါ။ ထည့်လည်း ဘာ မှ မဖြစ်ပါဆိုသူတွေကတော့....
၁။ ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း မိသားစု
၂။ မစုလင်းပေ (စလုံး)
၃။ ဒေါ်မော်ရင်းနဲ့ မိုးမိုး (စလုံး၊ မြန်မာ)
တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ စာရေးသူဖက်က လှူဖို့ အနည်းငယ်ပဲ ကျန်းပြီး အားလုံးနီးပါး လှူဒါန်းသွားကြပါတယ်။
အံ့ဩစရာက ပြည်တွင်းကနေပြီး စင်္ကာပူရှိ သူငယ်ချင်းကနေတဆင့် လှူပါ့မယ် ဆိုသူတွေ ပါဝင်နေခြင်းပါ။ အုပ်ရေကလည်း ဆယ်ချီရာချီတွေပါ။
အားလုံးတစ်သားတည်းဖြစ်စေဖို့ လှူဒါန်းတဲ့ အုပ်ရေ အရေအတွက်ကိုတော့ ဖော်ပြမနေတော့ပါ။ သံဃာတော်တွေကို ကပ်လှူမှပဲ အလှူရှင်အမည်တွေကိုအုပ်ရေနဲ့တကွ မေတ္တာပို့နိုင်ဖို့ ထည့်သွင်းပေးသွားပါမယ်။
ပြည်တွင်းက အလှူရှင်တွေ၊ ပြည်ပက ခရီးကြုံသူတွေလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သာဟတ္ထိကမြောက်ချင်ရင် ဇန္နဝါရီလ၊ ရှစ်ရက်နေ့ ဆွမ်းကပ်ပွဲကို ကြွရောက်ပြီး အတူတကွ ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ စာအုပ်ဆက်ကပ်ရင်း နေ့လည်စာ လာရောက် သုံးဆောင်ကြပါစေလိုကြာင်း ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
ကိုမင်းထွဋ်အောင်၊ ဖုန်း ၉၂၃၉၃၅၇၄။
058-69562-9 (POSB Saving) က တဆင့် အလှူငွေ ပေးလွှဲနိုင်ကြပါပြီ။
သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့ ကျောင်းဒကာ၊ ဒကာမတွေဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးဖြစ်နေရမယ် ဆိုခဲ့တဲ့ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့.....
Labels: စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ, ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/30/2014 - No comments
"ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထောင်သက် ၃၅နှစ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာပါလဲ" လို့ ဗြိတိန်ရဲ့ Bargain Hunt တီဗွီရှိုး တင်ဆက်သူကမေးတော့ အမျိုးသမီးရဲ့ တိုတိုတုတ်တုတ် အဖြေက "မျှော်လင့်ချက် သိပ်မထားနဲ့ (Low expectation)" တဲ့။ ကြားနေကျ စကားတစ်ခွန်းပေါ့။ စိတ်ဝင်စားစရာက ဒီစကားကို ထောက်ခံပေးနေတဲ့ သိပ္ပံဆိုင် ရာ တွေ့ရှိမှုတွေပါ။
ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိမှုအရ ဒါဟာ ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထောင်သည် အ တွက်ရယ်မဟုတ်၊ လူတိုင်းဘဝပျော်ရွှင်မှုမှာ အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်နေပါတယ်။
ပထမအဆင့်မှာ ငွေရေးကြေးရေးအရ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ လူ ၂၆ ယောက်ကိုရွေးပြီး အရှုံးအမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာမယ့် သူတို့ ဦးနှောက်တွေရဲ့တုန်ပြန်လာပုံတွေကိုလည်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ကူးထားပါသတဲ့။
ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ လောင်းကစားဝါသနာပါသူ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ရဲ့ အရှုံးအနိုင်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို စစ်ဆေးတာပါ။
သူတို့တွေ့ရှိမှုအရ ပျော်ရွှင်မှူဆိုတာ ဘယ်လောက်အများကြီးနိုင်တယ်၊ မြတ်တယ် ဆိုတာထက် မျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါသတဲ့။ မျှော်လင့်ထား တဲ့အဖြေထက်သာနေရင် ပျော်သွားကြတာပဲ။ မှန်းထားတာများရင် စိတ်ညစ်ရဖို့ လည်း များသွားတယ်။ ဒီတော့ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ ကိန်းသေ ညီမျှခြင်းလည်း ထွက် လာတယ်။
ဒါက အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ အနှုတ်၊ ပျော်ရွှင်မှုတဲ့။
ဒါကို "The fundamental equation of happiness" လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အတောမသတ်နိုင်တဲ့ လောဘသံသရာနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာ မကောင်းလှဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Sarin နဲ့ Baucells တို့ရဲ့ တွေ့ရှိမှုတွေက ထောက်ခံပေးထားပြန်တယ်။
သူတို့ကတော့ ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးတွေထဲက အမေရိကန် ဘီလျံနာတွေဟာ တဲပုတ် ထဲက ဆိုမာလီယာတော်လှန်ရေးသမားတွေထက် ပိုမပျော်ပါဘူးလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ ဒီနေ့ Gary Hayden ရဲ့ want to be happy? lower your expectation ဆောင်းပါးထဲကပါ။
ခရီးထွက်စဉ်က ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ စပါတာတပ်ဇာတ်ကားထဲက ဒိုင်ယာလော့လေး ကလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
စပါတာတပ်က သူ့နောက်လိုက်တွေကို အနည်းဆုံး ပေါင်မုန့်နဲ့ဝိုင်ရစေရပါမယ်လို့ဆိုတော့ စစ်သားတစ်ယောက်က
"ဝိုင်ရှိနေမှတော့ ပေါင်မုန့်ကို မလိုတော့ဘူး" တဲ့။
စစ်သားတွေအားလုံးက "ဟေး" ဆို လက်ခုပ်တွေ ပြိုင်တူတီးကြလို့လေ။ သဘာဝကျပြီး ကြည်နူးစရာ ပြကွက်နဲ့ ဒိုင်ယာလော့လေးပါ။
သန္တုဋ္ဌီ ပရမံ သုခံ
telenor နဲ့ internet
in ဇင်ဝေသော်, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း - on 10/29/2014 - No comments
(Kyaw Min Kyaw Min) "အခု(မှ) telenor နဲ့ internet ကိုင်နှိုင်ပါပြီဘုရား"
ဥရောပထဲမှာကို ဒီလူတွေက ဘာသာရေးစွဲ အနည်းဆုံး၊ သူခိုးအနည်းဆုံးတွေ။
သူတို့ကျွေးမွေး၊ ပညာသင်ပေးထားတဲ့မြန်မာတွေလည်း အများကြီး။
အများစုက ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဗဟိုပြု ထားနိုင်ကြပြီမို့ ဘာသာရေးအန္တရာယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအန္တရာယ်လည်း အနည်းဆုံးပဲ။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 10/29/2014 - No comments
တောင်။ ။ "ဂျပန်မှာနေတဲ့ ကျမတို့အသိမိတ်ဆွေတွေ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတော့ သူတို့ပြန်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးကလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေ ပဲပေါ့။ သူတို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဂျပန်အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ကြည့်ကြတာ ပါ။ ဆိုင်တွေမှာ သန့်ရှင်းအောင်ထား၊ လေအေးစက်တွေ တပ်ဆင် စတာတွေပေါ့။ ဈေးကိုလည်း သာမန်လူထု လက်လှမ်းမှီအောင် အများကြီး တင်မထားဘူး ပေါ့။ အလုပ်ဖြစ်တယ်သိရလို့ ဝမ်းသာစရာပဲ။ လူထုအများစုက လိုက်နိုင်ပါတယ်"
ထိုင်ဝမ်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားပါ။
မြောက်။ ။ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးကိုယ်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရင်တော့ တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ စာရင် ပိုအားကောင်းမယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါဆို သည်းခံ ဖို့၊ အနစ်နာခံဖို့လည်းလိုမယ်။ သည်းခံ၊ အနစ်နာခံဆိုပြန်တော့ ဘယ်အတိုင်း အတာအထိ သည်းခံ၊ အနစ်နာခံရမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတက်လာမှာလည်း အမှန်ပဲ။ ဘယ်လိုပဲဆိုဆို သဘောတူရာအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံနဲ့ ဆိုရင် စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်းမရရင်တောင် လမ်းပြသလိုတော့ ဖြစ်သွားနိုင် တယ်။ ဖြစ်နိုင်မှန်းသိရင် စွမ်းနိုင်သူတွေပါ လိုက်လာနိုင်တယ်။
တောင်။ ။ ကြာပါပြီ၊ ရွာကရေရဖို့ မိုးထိုင်စောင့်ရတဲ့အချိန်။ ရေတွင်းတူးဖို့က လည်း ပေ ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ လောက်တူးမှရမယ်ဆိုတော့ အစိုးရတူးပေးတဲ့ တွင်းကြီးတစ်တွင်းပဲရှိတယ်။ ဒါက သုံးဖို့သောက်ဖို့ပဲ။ စိုက်ပျိုးဖို့ မရဘူး။ ဒီ ရေတွင်းမျိုးကလည်း အစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်စာနာမှုအဖွဲ့တွေတူးမှ ရနိုင် တယ်လို့ လက်ခံထားကြတာ။ ဘယ်သူမှ စမ်းမတူးဘူး၊ အရင်းအနှီးနဲ့ အထူးသဖြင့် အရဲစွန့်မှုလိုတယ်မဟုတ်လား။ တူဖြစ်သူက ကျိုးစားပြီး ရေတွင်း တူးကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ အားပေးလိုက်တယ်၊ ဒါကိုပဲ ဥစ္စာစောင့်က သဘော မတူလို့ တူးသူတွေရော၊ တွင်းပိုင်ရှင်ကိုပါသေအောင်လုပ်မှာဆိုတဲ့ နာမည် ကြီး(တကယ် အကြီးစားကြီး၊ နိုင်ငံသိ) ဂိုဏ်းဘုန်းကြီးစကားကြောင့် ကပျက် ယပျက်တွေရှိသေးတယ်။ ဒီကြားထဲ တွင်းပိုင်ရှင်က အကြီးအကျယ်နေ မကောင်းဖြစ်တော့ နာမည်ကြီး ဂိုဏ်းဘုန်းကြီးကိုပဲ ပသရတော့မလို၊ ဥစ္စာစောင့်ကိုပဲ ပသရတော့မလို။
တူဖြစ်သူက အမာစားမို့တော်ပါသေးရဲ့။ ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့လူက ဖျားမှာ နာမှာ ပဲ၊ သေတောင်သေဦးမှာ။ ရေမထွက် ထွက်အောင်တူးမယ်ဆိုတော့ နောက် ဆုံး ရေထွက်လာရော။ သူ့တွင်းလည်း ရေအောင်သွားရော သူ့စောင့် ကြည့်နေ တဲ့ရွာသားတွေ သွေးရဲသွားပြီးလိုက်တူးကြတာ အခု ရေတွင်းတွေ ရွာမှာ အများကြီးပဲ။ ဆီရှိရင် ရေရှိပြီ။
မြောက်။ ။ မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီး ဂိုဏ်းဘုန်းကြီးလို ကပျက်ယပျက် သမားတွေကလည်း ပေါမှပေါ့။
မြန်မာပြည်ဟာ ပြည်ပအတွေ့အကြုံလိုနေတာတော့ အမှန်ပဲ။ အဲဒီ အတွေ့ အကြုံ က လူမျိုးခြားဆီက(လိုပါတယ်) ထက် မြန်မာတွေဆီကရရင် ပိုမြန်နိုင်မယ်။
တောင်။ ။ဥပမာ အနည်းဆုံး ကိုယ့်ကြောင့် လူဆယ်ဦးအလုပ်ရသွားမယ်ဆိုရင်ပဲ ဝမ်းသာစရာ မဟုတ်လား။
လက်ရှိအစိုးက Job creation လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အဝေးကြီး။ အနေအထားမရှိသေးသလို တာဝန်အဲသလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာတောင် မသိသေးတဲ့ လူကြီးတွေအများကြီး။
(မယုံ မရှိနဲ့၊ ငမှုံတို့ကိုယ်တွေ့)
in ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/28/2014 - No comments
မွေးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၈) က ဘီးလ်ဂိတ်နဲ့ သွားတူနေပါပေါ့လား။ သူကတော့ ဟုတ်လို့။
ကိုယ်ကတော့ စကော်ပီယံ၊ ကင်းမလက်မည်း၊ ခေါင်းမာ၊ ထင်ရာလုပ်၊ ထင်ရာစိုင်း။ တဇောက်ကန်း။
Labels: ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
in ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 10/28/2014 - No comments
အချိန်ပိုလေးတွေကို စှစည်းပြီး လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ အဆင်းအတက်ခရီးစဉ်တချို့နဲ့ သုံးနှစ်ကာလကိုပြန်ကြည့်တော့ "ထိပ်ဆုံးထိမရောက်ခဲ့ရတောင် အလယ် အလတ်တော့" "ရှိမယ်" လို့ ထင်မိပါတယ်။ လေးအုပ် ဖြန့်ချီပြီး၊ နှစ်အုပ်က အဆင်သင့်၊ စာမျက်နှာ နှစ်ထောင်ကျော်။ ဘဝဖြစ်စဉ်အတိုင်း လက်ပြကျန်ရစ်ခဲ့ တဲ့ ရာသီဦးကမ်းစပ်တချို့ရှိခဲသလို့ နားလည်မှုအရင်းတည်၊ ပိုပြီး မြဲမြံလှိုက်လှဲတဲ့ ကမ်းသစ်တွေကလည်း တဝေ့တဝဲမို့ ကျေနပ်ရပါတယ်။ လောကတံထွာ။
၁။ မျှဝေခြင်း တစ်
ရေသည်ယောက်ျားရဲ့ ဒုတိယရေဖိုးအလှူအဖြစ် ကျေးဇူးရှင်မိခင်တက္ကသိုလ် (သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မန်း)ကို ဆွမ်း၊ သင်္ကန်းနဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ် (နားဝင်မချိုနဲ့ ပဋိ ပက္ခ) လှူဒါန်းဖို့ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးတဲ့ စင်္ကာပူရီးယန်း ဒကာ၊ ဒကာ မတွေကလည်း သူတို့ပါလိုက်ပြီး အားပေးမယ်ဆိုလို့ ဆစ်လ် အဲယား(Silk air) မန္တလေးကိုပျံသန်းမယ့်ရက်ကို ပြောင်းလဲယူဖို့တော့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်ကနေ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် ကို မိတ်ဆွေရဟန်းတစ်ပါး ကတဆင့် ပြောင်းလဲယူခဲ့ရပါတယ်။
၂။ မျှဝေခြင်း နှစ်
ဒီအိုင်ဒီယာလေးရခဲ့တာကတော့ အပြင်ဒကာ၊ ဒကာမအချို့နဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ကိုအောင်မင်းဇော်(မလေးရှား)ဆီက ဖြစ်ပါတယ်။ "စာအုပ်တွေလှူမယ်ဆိုရင် တပည့်တော်တို့လည်း တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းချင်ပါတယ်" လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဆို ကျန်တဲ့သူတွေရော၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးစာအုပ်တွေမို့ ဘာသာရေးလောက် မများရင်တောင် ရှိနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီစာအုပ်တွေ သံဃာအပါး(စာသင်သား၊ ဆရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆရာတော်များ) ၄၀၀ ကျော်ကို လှူဒါန်းလိုသူတွေအနေနဲ့လှူဒါန်းနိုင်အောင် စီစဉ်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က ကိုယ်တိုင် အားလုံးစီစဉ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
(က) တစ်အုပ်ကို ၂၅၀၀ ကျပ်၊ နှစ်အုပ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ်။ ဆင်း ၇ ဒေါ်လာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ (စာမူခ တင်မထားတာကလွဲရင် သယ်ယူခ အပါအဝင် အားလုံး ကာမိပါတယ်။ )
(ခ) တစ်စုံ (နှစ်အုပ်)မှစပြီး လှူလိုက လှူနိုင်ပါတယ်။
(ဂ) အလှူရှင်ရဲ့အမည် စာအုပ်တိုင်းမှာ ထည့်ပေးပါမယ်။
(ဃ) လှူဒါန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ အမည်၊ လှူမယ့်စာအုပ်အရအတွက်ကို ကမ်းလက် အီးမေးထဲ(lek.camm@gmail.com) အီးမေးပို့ပေးစေလိုပါတယ်။ ဘယ်လိုလှူရ မယ်၊ ဘယ် ဘဏ်အကောင့်ထဲ ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာ အလှူရှင်တွေဆီကို သီး သန့်အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
(င) အုပ်ရေ ၂၅၀ ကုန်ပြီး ၆၅၀ ကျန်ပါသေးတယ်။ အစုံ ၄၅၀ ပြည့်ရင် စာရင်း ပိတ်၊ အလှူရှင်စာရင်းကို တင်ပေးသွားပါမယ်။
(ကူညီမယ့်သူ ရှာမထားမိခြင်း၊ ဘဏ်စနစ် စနစ်မကျလှသေးခြင်းကြောင့် ပြည် တွင်းက လှူလိုသူတွေကိုတော့ တောင်းပန်ရပါလိမ့်အုံးမယ်။)
ကိုအောင်မင်းဇော်၊ ဒီကိစ္စ (ငွေရေးကြေးရေး) အတွက် လိုလိုချင်ချင် အကူ အညီပေးကြတဲ့ ကိုမင်းထွဋ်အောင်၊ မနှင်းဝေအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံ၊ အထူးသဖြင့် မန္တလေးကနေ စီစဉ်ကူညီမယ့် ဆရာတော် ဦးစန္ဒာသီရိတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကို ဒီကနေ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
အလွန်အမင်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကလွဲရင် ဆရာသစ္စာနီ၊ မောင်ကျော်သာ (ပဲခူး) ကိုသရဝဏ်(ပြည်) စသူတို့ပါ ဆွမ်းကပ်ပွဲကို လိုက်ပါကုသိုလ်ယူကြမှာမို့ သူတို့ မိတ်ဆွေ၊ သူတို့စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်း ခဏဖြစ်ဖြစ် ဆရာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင် ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Labels: ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ
ဝမ်းလို့ခေါ်တဲ့ သူဌေးလူငယ် တစ်ယောက် တောင်ပေါ်တက်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီး
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/27/2014 - No comments
ဘယ်မြို့မှာလည်းတော့ မမှတ်မိဘူး။ ဝမ်းလို့ခေါ်တဲ့ သူဌေးလူငယ် တစ်ယောက် တောင်ပေါ်တက်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီး တဲ့။ နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး၊ ဟယ်ရီပေါ်တာထဲကလိုလိုပဲ။ ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း လည်း မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တော့ဟုတ်ဟန်တူပါတယ်။ လူနေအိမ် လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုလား။ အခုတော့ အထဲမှာ ရက်စတောရင့်ဖွင့်ပြီး စီးပွားရှာ လို့ကောင်းနေကြတယ်။
အင်း မြန်မာတွေဆိုရင်တော့ ဘုရားတက်တည်မယ့်နေရာမျိုးပဲလို့ ကွမ်းစားရင်း စဉ်းစားနေတုံး ဒကာမတစ်ယောက်က ဘယ်အချိန် ဓာတ်ပုံဝင်ရိုက်သွားမှန်း မသိ လိုက်ဘူး။ အီးမေးပို့လာမှ သိရတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ, နှစ်ပြားတန် အတွေး - on 10/27/2014 - No comments
"သစ်သီးသည်၊ ဖျာသည်တွေဆိုတာ အလှဆုံး၊ အပြစ်အနာအဆာ အကင်းဆုံး အသီး၊ ဖျာ တွေကို အပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားတတ်ကြတယ်၊ ဒါမှလည်း ဈေး ဝယ်တွေရဲ့ မျက်စေ့ကို ဖမ်းစားထားနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ ဈေးဝယ်သူတွေက လည်း ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရသွားတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ် လည်းဝယ်မလို့ရွေးရော အောက်မှာ ပိုကောင်းတာ၊ ပိုလှတာရှိနိုးနိုးနဲ့ မွှေနှောက် ပြီး ရှာတတ်ကြပြန်တယ်။ ဒါကလည်း လူ့သဘာဝပဲမဟုတ်လား။ အရွေးများသွားရင် အာရုံတွေပြားသွားပြီး ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲ ဆို တာတောင် ဆုံးဖြတ်လို့ မရဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ အရှင်းဆုံးသီအိုရီကတော့ သစ်သီးဝယ်၊ ဖျာဝယ်မယ်ဆို အပေါ်ဆုံးကဟာသာယူလိုက်၊ အဲဒါက ဈေးရောင်း သူကိုယ်တိုင်ရွေးပေးထားတဲ့ ကိုယ်ဝယ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းပဲ"
ဥယျာဉ်စိုက်ဝါသနာပါတဲ့ဆရာက အဲသလိုတွေးတွေးဆဆပြောဖူးပါတယ်။ သူ့ အယူအဆကလည်း တော်တော်သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ အခု ဆရာပြောခဲ့တာကိုပြန်စဉ်းစားမိရင်း
"ဘဝမှာ အမောဖြေချိန်မရှိလောက်အောင် ပြေးလွှားနေကြရတာဟာ သစ်သီး မရှိလို့လား၊ သစ်သီးမရှာတတ်ကြလို့လား" လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။
ဆရာနဲ့ ဒီတစ်ခါထပ်တွေ့ရင် ဒီကိစ္စကို ပြန်ပြီးမေးမြန်းဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါသေး တယ်။
Labels: ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ, နှစ်ပြားတန် အတွေး
ထိုင်ပေက ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသကျောင်း
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/26/2014 - No comments
ထိုင်ပေက ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသကျောင်း(Oversea Chinese Theravada Buddhist Center) မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေပါ။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဒါကို "အကြွားလည်း မထူပါနဲ့" လို့ ဆက်တယ်။
နောက်တစ်ယောက်က "ကုလားလည်း မယူပါနဲ"့ လို့ ဆက်ချင် ဆက်ဦးမှာ။
ဒါဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဂိုးဂွင့်ဂွက်ဂွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
"လွမ်းမောဖွယ်ရာ များစွာဖြင့် " (နေကောင်းကင်)
in ကဗျာ, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နေကောင်းကင် - on 10/26/2014 - No comments
နေကောင်းကင်ဆိုတဲ့ ပုပုညှက်ညှက်ကောင်လေး ရေးထားတဲ့ကဗျာ ပါ။ ရှင်သစ္စာ ရဲ့ ဝေါပေါ်က ယူထားတာ။ လှလှပပလွမ်းပြထားတယ်။ လူလည်း တော်တော်စုံ တယ်။
၃။ အကျင့်ရယ် (အ,သုံးလုံး) မှာ ငါက အားလုံးထက် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုမြင့်တယ်" ဆိုမိတော့
"ရှေ့နှစ်ခုက ထားပါတော့၊ အကျင့်က ဟုတ်လို့လားဟာ" ဆိုတဲ့အသံကို ပြန် ကြားမိလို့ ပါ။
တို့တစ်တွေ ခိုစဉ်တုန်းက - - - ။
လေးစားကြည်ညို မှုမျိုးကို
သင်ခန်းစာချို ချို တွေနဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့
ခေါင်းလောင်းသံအချို့ ရပ်တန့်ခဲ့ကြ ။
ခြောက်လည်း မကြောက်တတ်ခဲ့ကြ ။
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် သီချင်းတွေဆိုခဲ့ကြ ။
(တစ်ခါတစ်ခါ ရပ်လို့တောင် ကြောင်လိုက်သေး)
ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ ကျောက်တော်ကြီးအရှင်ဘုရား ။
ဘယ်ဌာနေ ရောက်နေပါလိမ့် - - - ။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ - - -
' ငါ့နံရိုးပေါ်က ဂီတ ' ထဲက
ကြယ်စင်မှူးရဲ့ မမမိုးက
လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးလို့ ဆိုပါလား ။
သူ (ကြယ်စင်မှူး) ပြောတော့
မောင်သစ်ဝေရဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ မမမိုးပါတဲ့ ။
ကဲ မောင်သစ်ဝေ - - - ။
အသီးအပွင့်တွေ စုံလို့ ။
ဖက်တီးတို့များ ရယ်နိုင်တုန်းပါလား ။
ဆရာဇင်ဝေသော် ဆိုပါလား ။
သူ့မှာ စုဝေးနေရှာရော့မယ် ။
စကားလုံး (လုံးဝ)မရှုံးသူ ကိုညိုလုံး
ဘယ်ဆီ ပုန်းနေပါလိမ့် ။
ဇာတိတွေ ပြပြီးရင်းပြနေမှာပေါ့ ။
မမနွယ်ရေ - - -
'မလေး'ကို အရှက်မဲ့စွာ ရှာနေတုန်းလား။
ခပ်ရင့်ရင့် လွမ်းမိပါသေးတယ် ။
မသီတာကို ခင်ဗျား ချစ်တယ်ဆိုတာ
မနီလာ ဆိုတဲ့ နာမပညတ်လေးကိုတောင်
ခင်ဗျားလို အသည်းကွဲသမားပါပဲလေ ။
ငါ့ချစ်သူ 'နန္ဒာ' ပြီးရင်
ငါ အမုန်းဆုံးလူဟာ 'ဒင်းပဲ'လို့
ခြေဖျားထောက် မြှောက်မြှောက်ပြတတ်သူ ရှင်ဂ္ဈန်
ဇနပုဒ်လေးမှာ ဗွက်က္ဈံနေပြီလား ။
Fbမှာ မျက်စိများနောက်လောက်ပါရဲ့ ။
လွမ်းတတ်ရင်တော့ လွမ်းချင်စရာ - - - ။
သူ ဆူမှာ ကြောက်လို့ပါ ။ ။
Labels: ကဗျာ, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နေကောင်းကင်
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး - (2)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/25/2014 - No comments
အနောက်နဲ့ အခြား ( The West and the Rest )
၁၉၉၀ ခု စောစောပိုင်းနှစ်တွေအတွင်း ဥရောပထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ မွတ်စလင်တွေဖြစ်ပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥရောပနိုင်ငံတွေအပူပန်ဆုံးကလည်း မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက လူဦးရေဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေရဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းက ဥရောပမှာ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီး အဲဒီအထဲက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းက ဘရပ်ဆဲမြို့မှာပါ။ နောက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမဏီထဲက တူရကီ၊ ပြင်သစ်ထဲက အယ်(လ်)ဂျီးရီးယား မွတ်စလင်တွေဟာ ဒေသခံယဉ်ကျေးမှု ရှိသူတွေ နဲ့လိုက်လျောညီထွေ မရှိကြဘူး။ ဥရောပတိုက်ထဲမှာ ဒီလို ပူပန်စရာလက္ခဏာတွေ ရှိလာနေပါတယ်။ “ ဥရောပ (၁၃)နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥရောပတစ်တိုက်လုံး စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ် ” လို့ ဂျိန်း မာရီဒိုမိနာ့(ခ်ျ) ( Jean Marie Domenach ) က ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမြင်အပေါ် အမေရိကန် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ကလည်း
ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်။ “ ဥရောပသားတွေ အမြင်မကြည်တာက တချို့ကိုပါ၊ အရှေ့ဖက်ကနေ လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုဖြစ်တဲ့လူ ပြင်သစ်မှာ အနည်းငယ်ပဲ ရှိမှာပါ၊ တကယ်တော့ ပိုလန်လူမျိုးတွေက ဥရောပတိုက်သားဖြစ်သလိုကက်သိုလစ်လည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဥရောပတစ်တိုက်လုံးလိုလိုမှာ အာရပ်အာဖရိကန် မဟုတ်တဲ့လူတွေအပေါ် စိုးရိမ်စိတ်၊ကြည့်မရတဲ့စိတ် မဖြစ်ကြပါဘူး။ ရန်လိုမှုက အဓိကအားဖြင့် မွတ်စလင်တွေအပေါ် ဖြစ်တာပါ။ “ immigre ” ဆိုတဲ့ စကားကကိုအစ္စလာမ်နဲ့ သံတူကြောင်းကွဲပါ။ အခုဆိုရင် အစ္စလာမ်က ပြင်သစ်မှာ ဒုတိယလူဦးရေ အများဆုံးဘာသာဖြစ်လာနေပြီးပြင်သစ်သမိုင်းမှာ အစ္စလာယဉ်ကျေးမှု၊ မွတ်စလင်လူမျိုးရေးဝါဒတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်နေပြီဆိုတာ ပြသလျက်ရှိနေပါတယ်။ (Note-24)
ဒါပေမဲ့ ပြင်သစ်တွေက လူမျိုးရေးအစွဲထက် ယဉ်ကျေးမှုအစွဲ ပိုကြီးကြပါတယ်။ သူတို့ရုံးကန်ကနားတွေထဲမှာ
ပြင်သစ်လို မွတ်နေအောင်ပြောနိုင်တဲ့ လူမည်းအာဖရိကန်တွေကို သူတို့လက်ခံပါတယ်။ သူတို့လက်မခံနိုင်တာက
မွတ်စလင်ကျောင်းသူတွေ ကျောင်းထဲ ခေါင်းမြီးခြုံတာကိုပါ။ ၁၉၉၀ ခုမှာ (၇၆) ရာခိုင်နှုန်း ပြင်သစ်လူထုက ပြင်သစ်မှာအာရပ်တွေ များလွန်းတယ်။ (၄၆) ရာခိုင်နှုန်းက လူမည်းတွေ များလွန်းတယ်။ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းက အာရှသားတွေများလွန်းတယ်။ (၂၄) ရာခိုင်နှုန်းက ဂျူးတွေများလွန်းတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ (၄၇) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ဂျာမန်လူထုက သူတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာ အာရပ်တွေ နေထိုင်နေတာကို သဘောမတွေ့ဘူး၊ (၃၉) ရာခိုင်နှုန်းကပိုလန်တွေကို သဘောမတွေ့ဘူး၊ (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းက တူရကီတွေ၊ (၂၂) ရာခိုင်နှုန်းက ဂျူးတွေကို သဘောမတွေ့ဘူး လို့ဆိုကြတယ်။(Note-25) အနောက်ဥရောပမှာ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးနေရာကို အာရပ်ဆန့်ကျင်ရေးက နေရာယူ လာနေပါတယ်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ် လူထုက သဘောမတွေ့ဘူး၊ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူတွေအပေါ် လူထုက အမြင်မကြည်ဘူးဆိုတာကို ၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရော၊ တစ်ဦးချင်းကိုပါ
ဒေသခံတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေက သက်သေခံလျက်ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၀ ခု စောစောပိုင်း နှစ်တွေအတွင်းဂျာမဏီမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီး ထင်ရှားတာကတော့ လက်ယာပါတီ၊ အမျိုးသားရေးပါတီ၊ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ ဆန့်ကျင်ရေးပါတီတွေအနေနဲ့ လူထုထောက်ခံမဲတွေ ပိုရရှိလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောက်ခံမဲတွေက အများအားဖြင့်တော့အရေအတွက် အနည်းငယ် မျှသာပါ။ ဂျာမဏီ ရီပတ်ကလင်တန်ပါတီဟာ ၁၉၈၉ ခု ဥရောပတစ်တိုက်လုံး ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၇)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံမဲရရှိပြီး ၁၉၉၀ ခု ပြည်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ (၂.၁) ရာခိုင်နှုန်းပဲ ထောက်ခံမဲ ရခဲ့ပါတယ်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်တုန်းက မပြောပလောက်တဲ့ အမျိုးသားတပ်ဦး ( National Front ) ပါတီက ၁၉၈၈ ခုမှာ ထောက်ခံမဲ (၉.၆)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိလာပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ (၁၂) နဲ့ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာတော့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ သမ္မတလောင်း နှစ်ယောက်က ထောက်ခံမဲ (၁၉.၉) ရရှိပြီး Toulon နဲ့ Nice မြို့တွေအပါအ၀င် မြို့တော်ဝန်ရာထူးနေရာတွေကို အမျိုးသားရေးတပ်ဦးပါတီက ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အီတလီနိုင်ငံကအမျိုးသားတပ်ပေါင်းစု ( MSI/ National Alliance ) ပါတီကလည်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေမှာ ထောက်ခံမဲ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိရာကနေ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေရောက်တော့ (၁၀) နဲ့ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဘယ်(လ်)ဂျီယံ နိုင်ငံက Flemish Bloc/ National Front ကို ထောက်ခံမှုကလည်း ၁၉၉၄ ခု ဒေသတွင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၉) ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး အန်တွ (Antwerp ) မှာ (၂၈) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရခဲ့တယ်။ အောစတီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ Freedom ပါတီက ၁၉၈၆
ခုနှစ်မှာ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲ ရှိရာကနေ ၁၉၉၀ ခုမှာတော့ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၉၉၄ ခုရောက်တော့ (၂၃)
ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိကို တိုးလာခဲ့တယ်။ (Note-26)
၀င်ရောက်လာတဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဥရောပပါတီတွေဟာ အများအားဖြင့်တော့ မွတ်စလင် နိုင်ငံတွေထဲက
အစ္စလာမ်မစ်ပါတီတွေရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပါ။ သူတို့ နှစ်မျိုးလုံးဟာ အပြင်လူတွေဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သူတို့ပါတီရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်မှုကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ကိစ္စကို ဖော်ထုတ်ကြတယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်။ သူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ နိုင်ငံခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တော်လှန် တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ အစ္စလာမ်မစ်ပါတီတွေနဲ့ဥရောပအမျိုးသားရေးပါတီတွေဟာ အများအားဖြင့်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာထက် ဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ထောက်ခံမှု ပိုရရှိကြပါတယ်။ မွတ်စလင်နဲ့ ဥရောပရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း သူတို့နဲ့သံယောင်လိုက်ပြီး လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြတယ်။ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက အစိုးရတွေဟာ အခြေအနေနဲ့အညီ အသားကျအောင်ပြင်ဆင်ယူ လာကြရတယ်၊ သင်္ကေတ၊ ပေါ်လစီနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေမှာ ပိုပြီး အစ္စလာမ်ဆန်လာခဲ့တယ်။ ဥရောပရဲ့အဓိကပါတီကြီးတွေကလည်း လက်ယာပါတီ၊ လူဝင်မှုဆန့်ကျင်ရေးပါတီတွေရဲ့ ၀ါဒတွေကို လက်ခံကျင့်သုံး လာကြတယ်။
ဒီမိုကရေစီကျကျ နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးမယ်၊ အစ္စလာမ်မစ် (သို့) အမျိုးသားရေး ပါတီရဲ့ အတိုက်
အခံပါတီ နှစ်ပါတီထက်လည်း ပိုနေမယ်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံမဲအများဆုံး (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံပါတီ (အစ္စလာမ်မစ်နဲ့ အမျိုးသားရေးပါတီ) အနေနဲ့ ထောက်ခံမဲ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်သွားတယ်ဆိုတာ အတိုက်အခံပါတီ တူတူတန်တန်မရှိတဲ့အခါနဲ့ သူတို့မဟာမိတ်က အာဏာရနေတဲ့ အခါမျိုး တွေမှာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဩစတြီးရီးယား နဲ့ အီတလီမှာ ဒါမျိုးအဖြစ်တွေ အထိုက်အလျောက် ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။
the second trip to one of Asia's Tigers this year
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/25/2014 - No comments
After having lunch and checking out, we are leaving for airport to go my second home (for them, home) Singapore.
Thank Taiwan and those who we met and helped us during our stay. It isavery nice trip, generally. For me, it is the second trip to one of Asia's Tigers this year. (I went to Korea last month.)
Mangala Vihara(M.V) is planning to go to Myamar for breakfast/lunch donation to Statate Pariyatti Sasana University(Mandalay) on the 30th of Dec, 2014. Hopefully everything goes smooth as planned.
The lost generation"? It should never happen.
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/24/2014 - No comments
နေ့ဆွမ်းက ထိုင်ပေအပြန် ရထားပေါ်မှာ။
မနေ့က သူတို့သိတဲ့ မွေးနေ့ လေ
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး - (1)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/24/2014 - No comments
တကယ်လို့ လူဦးရေကသာ သမိုင်းရဲ့ ကံကြမ္မာဆိုရင် လူဦးရေအရွှေ့အပြောင်းဟာ သမိုင်းရဲ့ မောင်းနှင်အား ပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မတူညီတဲ့ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်း၊ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ အစိုးရ ပေါ်လစီတွေကြောင့် ဂရိတွေ၊ဂျူးတွေ၊ ဂျာမန်မျိုးနွယ်စုတွေ၊ စကင်ဒီနေးဗီးယန်းတွေ၊ တူရကီတွေ၊ ရုရှားတွေ၊ တရုတ်တွေနဲ့ အခြားလူမျိုးစုတွေရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားဝင်ရောက်နေထိုင်မှုတွေ အများအပြားဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်။ ဒီလိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေထဲမှာ အချို့က အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး အချို့ကအကြမ်းဖက်မှုတွေ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉ ရာစုတွင်း ဥရောပတိုက်သားတွေဟာ လူဦးရေနဲ့နယ်မြေကျူးကျော်ခြင်းကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၈၂၁ ခုနဲ့ ၁၉၂၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဥရောပသား ၅၅ သန်းလောက်ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီအထဲမှာ ၃၄ သန်းဟာ အမေရိကန်မှာ နေထိုင်ကြတယ်။
အနောက်တိုင်းသားတွေက တိုက်ခိုက်အောင်မြင်တာတွေရှိတယ်။ အများအားဖြင့် အခြားလူမျိုးတွေကို ဖိနှိပ်ချေမှုန်းတယ်၊နယ်မြေသစ်တွေ ရှာဖွေပြီး လူဦးရေမထူထပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အခြေချနေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားသွားရောက် နေထိုင်ကြခြင်းဟာ ၁၆ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစုအတွင်း အနောက်တိုင်း အင်အားတိုးတက်လာရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံး အချက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။၂၀ ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အခြေအနေတွေတမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား ၀င်ရောက်နေထိုင်လာ မှုက အရင်ထက်တောင်ပိုများပြားလာခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ ခုမှာ တရားဝင်နိုင်ငံရပ်ခြား ၀င်ရောက်သူအရေအတွက် သန်း ၁၀၀ ခန့် ရှိခဲ့ပြီးဒုက္ခသည် အရေအတွက် ၁၉ သန်းနဲ့ တရားမ၀င်နေထိုင်သူ အရေအတွက်က အနည်းဆုံး ၁၀ သန်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံရပ်ခြားနေထိုင်သူ များပြားလာခြင်းဟာ ကိုလိုနီဘ၀က လွတ်မြောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံအသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ်လစီတွေက နိုင်ငံရပ်ခြားနေထိုင်ဖို့ တွန်းအားရော၊ ဖိအားပါ ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ခေတ်မီလာခြင်း၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းကလည်း နိုင်ငံရပ်ခြား သွားရောက်နေထိုင်ဖို့အတွက် ပိုလွယ်၊ ပိုမြန်၊ ပိုပြီးအကုန်အကျသက်သာစေတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာခြင်း ကလည်း စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ
ရှာဖွေဖို့နဲ့ မွေးရပ်နိုင်ငံမှာ နေရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနောက်ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုက ၁၉ ရာစုအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြား ၀င်ရောက်နေထိုင်မှုကို အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်စေသလို အနောက်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုက ၂၀ ရာစုအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားဝင်ရောက်နေထိုင်မှုတွေကို တိုးပွားစေပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး မိုင်ရွန် ဝေးနား ( Myron Weiner ) ပြောသလို “နိုင်ငံရပ်ခြား ၀င်ရောက်နေထိုင်မှုမှာ ဥပဒေသတစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာနေထိုင်လာသူတွေရဲ့စီးမြောမှုအားပါပဲ။ စလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မဆုံးတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘယ်လို ၀င်ရောက်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပေးခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု အဆင်ပြေအောင် အထောက်အပံ့တွေ ပေးခြင်း၊အလုပ်ရှာဖို့၊ အိမ်ရှာဖို့ အကူအညီတွေပေးခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်တယ်၊ နေရပ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေထံသတင်းအချက်အလက်တွေ ပို့ပေးနိုင်တယ် ” ဒီအနေအထား ကိုရောက်ပြီ ဆိုရင် ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး “ ပြဿနာတက်နေပါပြီ ”။(Note-21)
အနောက်တိုင်းသားတွေဟာ အနုမြူလက်နက် ပြန့်ပွားရေးကို အမြဲတန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို ထောက်ခံခဲ့ကြ ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား ၀င်ရောက်နေထိုင်မှုအပေါ် အမြင်ကတော့ တမူထူးခြားနေတယ်။၂၀ ရာစုရဲ့ နောက်ဆုံး နှစ် နှစ်ဆယ်မှာ ပါဝါချိန်ခွင်လျှာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သဘောထား မတူညီမှုတွေ အထင်အရှား ရှိခဲ့တယ်။၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေအထိ ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာ ၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများအားဖြင့် စိတ်လိုလက်ရရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အထင်ကရ အဖြစ်ဆုံးကတော့ သူတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်အားများ လျော့ကျလာခြင်းကြောင့် အားပေးအားမြှောက်တောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ကလည်း ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွေကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ဥရောပသားတွေလက်ခံမှုနှုန်းထား ဥပဒေကို ၁၉၆၅ ခုမှာပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ခုနဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေအတွင်း အသစ်ဝင်ရောက်နေထိုင်လာသူ များပြားရေး အတွက်လမ်းစတောင်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေမှာတော့ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တိုးပွားလာခြင်း၊
၀င်ရောက်နေထိုင်သူအရေအတွက် တိုးပွားလာနေခြင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေက ဥရောပသားတွေနဲ့ လုံးဝ
ဆန့်ကျင်နေတော့ ဒီပေါ်လစီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥရောပနိုင်ငံတွေက စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ နောက် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမေရိကန်မှာလည်း အလားတူ အပြောင်းအလဲ ရှိလာခဲ့တယ်။
(၂၀) ရာစုနှောင်းပိုင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်သူတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဟာ အနောက်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ အတွင်းမှာပဲ
တစ်နိုင်ငံကနေ တစ်နိုင်ငံ ကူးပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အနောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူပမာဏက ၁၉ ရာစုထဲ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ အခြား နေရာတွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အရေအတွက်ကို မီလာခဲ့တယ်။
၁၉၉၀ ခုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ ပထမဆုံး ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ သန်း (၂၀)၊ ဥရောပတိုက်မှာ ၁၅ သန်းခွဲ၊ သြစတေးလျနဲ့ ကနေဒါမှာ (၈)သန်း ရှိခဲ့တယ်။ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်က ဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေရှိ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့(၇) (သို့) (၈) ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရောက်လာတယ်။ ၁၉၉၄ ခုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်သူဦးရေဟာ ၁၉၇၀ ကထက် နှစ်ဆတက်လာပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့
(၈.၇) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ကာလီဖိုးနီးယားမှာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ နယူးယောက်မှာ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာခဲ့တယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေ အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူဦးရေ (၈.၃)သန်း ရှိပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေအတွင်း လေးနှစ်တာကာလထဲမှာတင်ပဲ (၄) သန်းခွဲ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူ အများစုဟာ အနောက်မဟုတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာဂျာမဏီထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့ တူရကီလူမျိုး ၁,၆၇၅,၀၀၀ အထိ ရှိခဲ့ပြီး ယူဂိုစလားဗီးယား၊ အီတလီနဲ့ ဂရိနိုင်ငံတွေက၀င်ရောက်လာသူတွေကလည်း ဒုတိယအများဆုံး အရေအတွက်မှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ အီတလီနိုင်ငံထဲ အဓိက၀င်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေက မော်ရိုကို နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုတော့ (အီတလီ အမေရိကန်တွေ သူတို့နိုင်ငံကို ပြန်သွားကြလို့ ထင်ပါရဲ့) တူနီးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်တွေက အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေရဲ့ အလယ်ပိုင်းရောက်တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံထဲ မွတ်စလင်ဦးရေ လေးသန်းလောက် နေထိုင်နေပြီး အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံအားလုံး ထဲမှာဆိုရင် မွတ်စလင် (၁၃) သန်းခန့် နေထိုင်လျှက် ရှိပါတယ်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ ဥရောပနဲ့ ကနေဒါတို့ ကသာဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေမှာတော့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အာရှတိုက်က ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း လက်တင် အမေရိက နိုင်ငံတွေက ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဥရောပနဲ့ ကနေဒါက (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိတော့ ပါဘူး။ အမေရိကန်ရဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းက နည်းပြီး ဥရောပကတော့ သုညနီးပါးပါ။ ၀င်ရောက် နေထိုင်လာသူတွေရဲ့ ကလေးမွေးဖွား နှုန်းက မြင့်မားနေတော့ ကျဆင်းလာတဲ့ အနောက်လူဦးရေကို သူတို့က ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ ပူပန်မှုတွေလည်း ပိုများလာခဲ့တယ်။ “ သူတို့ (အနောက်တိုင်းသားတွေ)ဟာ စစ်တပ်တွေ၊ တင့်ကားတွေနဲ့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကို မခံရဘဲ ဘာသာစကားမတူ၊ ကိုးကွယ်မှုမတူ၊ ယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ လူတွေဝင်ရောက်နေထိုင်လာခြင်းနဲ့ သိမ်းပိုက်မှုခံနေကြရပြီး သူတို့အလုပ်တွေ၊ မြေတွေ၊အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု စနစ်တွေကို လုယူသွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့ ဘ၀နေနည်း ထိုင်နည်းတွေကိုပါ ဒီလူတွေက ခြိမ်းခြောက်လာနေတယ်လို့ ခံစားနေကြရတယ်။ ” (Note-22*) မိမိတို့လူဦးရေကျဆင်းလာမှုအပေါ် အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ဒီလို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဟာ စင်စစ်အားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခအပေါ်မှာအခြေခံပြီး အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေ ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။” လို့ စတန်လေဟော့(ဖ်)မဲန်း ( Stanley Hoffmanm )က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ (Note-23)
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ - (2)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/23/2014 - No comments
“ ၁၉၄၈ ခု၊ ကုလသမဂ္ဂကြေငြာစာတန်းကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့စဉ်က စလို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဂျူး ခရစ်ယန်ရဲ့ ပညတ်ချက်တန်ဖိုးကို နားမလည်၊ သဘာဝနိယာမကို နားမလည်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ရှေ့တန်းရောက်လာတယ်။ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ဒီအနေအထားက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပေါ်လစီအသစ်တွေ သတ်မှတ် လာကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ဆထိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ ” လို့ အနောက်ရဲ့ အာရှအပေါ် ဝေဖန်မှုကလည်း အလားတူ ဆိုနေပြန်တယ်။ (Note-18)
နောက်လေ့လာသူတစ်ယောက်ကလည်း “ ဗီယင်နာမှာ အကြီးအကျယ်အနိုင်ရသွားသူကတော့ တရုတ်ပါပဲ၊ အနည်းဆုံး တခြားနိုင်ငံတွေကို မင်းတို့ ၀င်မရှုပ်နဲ့လို့ ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဘေဂျင်းဟာ အင်အားသုံးပြီး အစည်းအဝေးတွေမှာ ထောက်ခံမှုတွေရအောင် ပြုမူခဲ့တယ် ” (Note-19) လို့ သုံးသပ်တယ်။
ဗီယင်နာမှာ မဲရှုံး၊ အင်အားရှုံးခဲ့တဲ့နောက် လ အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သိပ်အရေးမပါလှတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခု တရုတ်အပေါ် အနိုင်ရလိုက်တယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ဘေဂျင်း (ပီကင်း) အိုလံဗစ်ပွဲတော် ကျင်းပခွင့် ရရှိရေးဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အဓိကပစ်မှတ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျ အများကြီးခံခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေကလည်း အိုလံပစ်ပွဲတော်အကြောင်း အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြနေတော့ လူထုရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကလည်း မြင့်မြင့်မားမား ရှိခဲ့တယ်။ တရုတ်အစိုးရက အခြားအစိုးရတွေအနေနဲ့ အိုလံပစ်အဖွဲ့ချုပ်တွေအပေါ် ဖိအားတွေပေးကြဖို့ စည်းရုံးလိုက်တော့ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ဟောင်ကောင်က လည်း မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးမှာ ပါဝင်ပူးပေါင်းကြတယ်။
အမေရိကန် ကွန်ဂရက်၊ ဥရောပ ပါလီမန်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေက ဘေဂျင်းကို အိုလံဗစ်မြို့တော်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ အိုလံပစ် ကော်မတီရဲ့ ရွေးချယ်ပုံစနစ်က လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ကို အခြေခံပေမဲ့ ထောက်ခံ၊ ကန့်ကွက်မဲတွေကတော့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းလိုင်းကြောင်းတွေအတိုင်းပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ခံမဲတွေကြောင့် ဘေဂျင်းက ပထမရပြီး ဆစ်ဒနီက ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ အစ္စတန်ဘူ(လ်) ထွက်သွားရတဲ့အတွက် ကွန်ဖြူးရှပ်၊ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေက ဘေဂျင်းကို မဲစုပေးလိုက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး ဘာလင်နဲ့ မန်ချက်စတာတို့ ထွက်သွားရပြန်တော့ (အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကလည်း) ဆစ်ဒနီကို စုပြီး ထောက်ခံခဲ့ကြပြန်တယ်။ စတုတ္ထအကြိမ် မှာတော့ တရုတ် အရှုံးရသွားပြီး အရှက်လည်း ရသွားခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် အမေရိကန်လည်း အဝေဖန်ခံလိုက်ရတယ်။
[ ဇယား ဖော်ပြရန်၊ မူရင်း စာနှာ- ၁၉၇ ။]
“အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်ဟာ တရုတ်ကို အကောင်သေးသွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အကြောင်း ပြချက်ကတော့ “ လူ့အခွင့်အရေး ” ပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တကယ့် အဖြစ်အမှန်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါ၊ နိုင်ငံရေးသြဇာပြမှုပါ။ ” လို့ လီကွမ်ယုက ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ (Note-20) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လူထုကတော့ လူ့အခွင့်အရေးထက် အားကစားကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗီယင်နာနဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် မဆီမဆိုင် လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး တရုတ်အပေါ် သြဇာပြလိုက်တာကလည်း အနောက်ရဲ့အားနည်းမှုကို သတိပေးလိုက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံရေးပါဝါ ပျောက်ဆုံးသွားရုံတင် မကပါဘူး ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀ိဝါဒကွဲမှု တွေကြောင့် အနောက်ရဲ့ စစ်အေးလွန်ကမ္ဘာထဲ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားလာအောင် ကျိုးစားလိုစိတ်ကိုလည်း လျော့ပါးစေပါတယ်။ စစ်အေးကာလ တွင်းမှာတော့ အနောက်နဲ့ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ဟာ “ ရင်းနှီးတဲ့ အာဏာရှင် ( Friendly tyrant ) ” ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ စစ်အေးကာလအတွင်းမှာ ကွန်မြူနစ်အတိုက်အခံတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ စစ်အစိုးရတွေ၊ အာဏာရှင် အစိုးရတွေကို (နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာအရ အနောက်က)အသုံးချခဲ့တယ်။ သူတို့နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက ချောချောမွေ့မွေ့ မရှိသလို သူတို့က လူသိရှင်ကြား လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်တဲ့အခါ အရှက်ရစရာတွေလည်း မကြာမကြာ ကြုံရတတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့နဲ့ ပေါင်းသင်းရတာက ကွန်မြူနစ်လောက် မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ သဘောတော့ရှိပါတယ်။ ဒီ အစိုးရတွေဟာ အများအားဖြင့် ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့လောက် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု မရှိဘူး။ ကွန်မြူနစ်တွေလောက် ကြာရှည်ခံမှာ မဟုတ်သလို အနောက်ကိုလည်း ကွန်မြူနစ်လောက် အန္တရာယ်မပေးနိုင်လောက်ဘူးလို့ မျှော်လင့် ထားနိုင်ပါတယ်။ ပိုအန္တရာယ်ရှိပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုလည်း မရှိသူနဲ့ နှိုင်းစာရင်ရင် သူ့လောက်အန္တရာယ်မရှိ၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုလည်းရှိသူနဲ့ ပေါင်းသင်းရမှာပါပဲ။ စစ်အေးလွန်ကာလထဲမှာတော့ ရင်းနှီးတဲ့ အာဏာရှင် (friendly tyrant) နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအကြား ရွေးချယ်မှုက ပိုပြီး ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ အနောက်ရဲ့ အလွယ်နည်းကောက်ချက်က ဒီမိုကရေစီကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အစိုးရတွေဟာ အနောက်ဖက်ကို ယိမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကောက်ချက်ဟာ မှားပါတယ်။ အနောက်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေက အနောက်ဆန့်ကျင်ရေးအစိုးရတွေ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒီအစိုးရတွေ၊ စာအုပ်ကြီးသမား အစိုးရတွေကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်မှာပါ။
ဘာသာရေးစာအုပ်ကြီးပါတီ ဖြစ်တဲ့ FIS ပါတီက ၁၉၉၂ ခု ရွေးကောက်ပွဲ သေချာပေါက်နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမှာ အယ်လ်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်က ကြားဝင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တော့ အနောက် နိုင်ငံတွေ တော်တော်စိတ်သက်သာရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။ တူရကီက အစ္စလာမ်စာအုပ်ကြီးပါတီဖြစ်တဲ့ Welfare Party နဲ့ အိန္ဒိယက BJP အမျိုးသားရေးဝါဒီပါတီတွေလည်း ၁၉၉၅ ခုနဲ့ ၁၉၉၆ ခု ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အနိုင်ရပြီးမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံလိုက်ရတော့ သူတို့ တော်တော်စိတ်အေးခဲ့ရပြန်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း အီရန်က သူ့ရဲ့ တော်လှန်ရေးနဲ့ ကြုံကြိုက်ခိုက်မို့ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာမှာတော့ သူများထက် ဒီမိုကရေစီပိုကျတဲ့ အစိုးရ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဆော်ရီအာရေးဗျ၊ အီဂျစ် အပါအ၀င် အခြားမွတ်စလင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကတော့ အနောက်တိုင်း အကျိုးစီးပွားထက် ဒီမိုကရေစီသိပ်မကျတဲ့ အရင်အစိုးရကို ပိုမိုစာနာမိတဲ့ အစိုးရအသစ်တွေကိုပဲ မွေးထုတ်ပေးပါလိမ့် မယ်။
လူကြိုက်များပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရမယ့် တရုတ်အစိုးရကလည်း အမျိုးသားရေးဝါဒလွန်ကဲတဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အနောက်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်က အနောက်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိတဲ့ အစိုးရတွေကိုပဲ မွေးထုတ်ပေးနေတယ် ဆိုတာကို အနောက်နိုင်ငံတွေက သဘောပေါက်သွားကြတော့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားမှုရော ဒီနိုင်ငံတွေအတွင်း ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ကြိုးစားလိုစိတ်ပါ ပျောက်ဆုံး သွားကြတော့တယ်။
My D.O.B in my passport
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/23/2014 - No comments
Many come and say "Happy birth day".this morning. I wonder why.
Oh! My D.O.B in my passport is on 23 of Oct. No wonder.
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ - (1)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/22/2014 - No comments
အာစီယံနိုင်ငံတွေကလည်း မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ကြဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့ အာစီယံ အစည်းအဝေးထဲကို ပါဝင်ဖို့ ၁၉၉၄ - ခုမှာ လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ ပြေရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ စကားအရ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ပေါ်လစီဟာ အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတာ သူတို့ ကိုယ်တိုင် လက်ခံလာရပြီး မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်လို့ အာစီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ အညီ ပြုမူဆောင်ရွက်ဖို့ သဘော တူလာခဲ့ရတယ်။
၁၉၇၀ နဲ့ ၁၉၈၀ - ခုနှစ်တွေ အတွင်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်ဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေ စီစနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးအပေါ် အခြေခံနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုဟာ ယုံမှားဖွယ်မရှိ အဓိက အကြောင်းတရားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဥရောပ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေအပါအဝင် အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ ဆောင်ရွက်မှုအပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်း အဝေး ကြီးတွေကလည်း စပိန် ၊ ပေါ်တူဂီ၊ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံ အများအပြား၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ ဥရောပ အရှေ့ပိုင်း ( နိုင်ငံတွေ ) အားလုံး ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးလာအောင် တွန်းအားတွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ အနောက်တိုင်းလွှမ်းမိုးမှု အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမို ကရေစီ ကျင့်သုံးခြင်းဟာ ပိုပြီး အောင်မြင်မှု ရှိပါတယ်။
အသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရတွေထဲမှာ ကတ်သိုလစ်နဲ့ ပရိုတက်စတင်း အား ကောင်းတဲ့ တောင်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်း ဥရောပကအစိုးရတွေဟာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိဖို့ ရာနှုန်းပိုများပြီး လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတွေရဲ့ အစိုးရတွေဟာ သူတို့လောက် မသေချာလှပါဘူး။ အရှေ့ အာရှထဲမှာ ကတ်သိုလစ်နဲ့ အမေရိကန် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ ၁၉၈၀ - ခုနှစ် တွေအတွင်း ဒိမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြန်လည်ကျင့် သုံးခဲ့သလို တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ ထိုင်ဝမ်ရှိ ခရစ်ယန်ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားဖို့ အဓိကဦးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ယခင်ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုထဲက နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်း ဘော်လ်တစ်ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီက တည်ငြိမ်အောင်မြင်ဖို့ ပိုများပြီး အော်သိုဒေါက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေနိုင်ပြီး ရေရာမှုလည်း သိပ်မရှိလှပါဘူး။ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ အတွင်း ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးကတော့ အလားအလာ နည်းလွန်းလှပါတယ်။
၁၉၉၀ - ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ အာဖရိကက လွဲရင် နိုင်ငံတော်တ်ာများများဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ လူထုတွေဟာ အနောက်တိုင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်သလို ခရစ်ယာန် ဘာသာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းနဲ့ ဆိုဗီယက် ပြိုကွဲမှုကြောင့် အနောက်နဲ့ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးဟာ အားကောင်းလာနေပြီဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိနေခဲ့ကြတယ်။ အနောက်တိုင်းရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးသဘောထား၊ အနောက်တိုင်းရဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး ပုံသဏ္ဍန်ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံး ရေပန်းစား နေပြီလို့ ယူဆလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး အားထုတ်မှုဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဦးစားပေး ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကို ဘု(ရှ်) အစိုးရက ထောက်ခံပြီး ၁၉၉၀ -ခု ဧပြီလထဲမှာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဂျိန်းဘေကာ ( James Baker ) က “ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ကြိုးစား ခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာ ဒီမိုကရေစီ ရှိနေတယ်။ ” နောက်ပြီး စစ်အေးလွန်ကမ္ဘာအတွက် “ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရေရှည်တည်တန့်စေရေး ကိစ္စကို ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင် အသစ်အဖြစ် သမ္မတ ဘု(ရှ်) က ချမျတ် ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ” ကြေငြာခဲ့တယ်။
၁၉၉၂ -ခု သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးကာလထဲမှာ ဘီ(လ်) ကလင်တန် ( Bill Clinton ) ကလည်း ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ ကလင်တန် အစိုးရအနေနဲ့ အထူးဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ စည်းရုံးရေးကာလတစ်လျှောက်လုံး ပြောခဲ့သမျှတွေထဲမှာ သူ့ရဲ့ အဓိက နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဟာ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးကြဖို့ အားပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတရာထူး ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အမျိုးသားထောက်ပံ့ငွေ ( National Endownment For Democracy ) သုံးပုံနှစ်ပုံ တိုးပေးဖို့ အကြံပြုခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အမျိုးသားရေး လက်ထောက်အရာရှိကလည်း သူတို့ရဲ့ အဓိကနိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပိုမိုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Enlargement Of Democracy) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးကလည်း ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေး အားထုတ်မှုဟာ အဓိက ဦးတည်ချက်လေးရပ်မှာ တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး ဒီဦးတည်ချက် အထမြောက် အောင်မြင်စေဖို့ အဆင့်မြင့်ရာထူးတစ်နေရာ တိုးချဲ့ ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။
အမေရိကန်တွေလောက် မသိသာလှပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး ကိစ္စတွေဟာ ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ အဓိကနိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက် ငွေချေးငှားခြင်းမှာ ဒီကိစ္စကို အဓိက လိုအပ်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။
၁၉၉၅ - ခုနှစ်ထဲ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်နှစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကတော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိသာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တယ်။ အနောက်မဟုတ်တဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း အားလုံးလိုလိုက အနောက်ကပေးလာတဲ့ ဖိအားကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဟိန္ဒူ၊ အော်သိုဒေါက် ၊ အာဖရိကန်နဲ့ လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတစ်ချို့တောင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကို ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်ကြတာကတော့ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာနဲ့ အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငြင်းဆန်မှုဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာ နိုးထခြင်း၊ ( Islamic Resurgence ) နဲ့ အာရှရဲ့ ရပ်တည်ချက် သဘောထား ( Asian Affirmation ) တွေက စုစည်းပေးလိုက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ထွန်းကားရေး လှုပ် ရှားမှုကြီးတွေအပေါ် အခြေခံပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန်တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု အရာမထင်ခြင်းဟာ သူတို့နိုင်ငံ အစိုးရတွေရဲ့ စီးပွားရေး ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်ချက်ပိုမို ခိုင်မာလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှ သတင်းသမားတွေကလည်း အာရှဟာ အနောက်အပေါ် မှီခိုနေရခြင်း၊ အနောက်ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ရခြင်းဆိုတာတွေ အခုမရှိတော့ဘူး၊ ၁၉၄၀ - ခုနှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးတစ်ဝက် လွှမ်းမိုးထားနိုင်မှု၊ ကုလသမဂ္ဂကိုဦးစီးထားမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်စာတမ်း ဆိုတာတွေက လည်း သမိုင်းထဲမှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့ပြီလို့ ထပ်တလဲလဲ သတိပေး ( ပြောဆိုရေးသား ) ခဲ့ကြတယ်။
စင်္ကာပူအရာရှိ တစ်ယောက်က ဒီလို စောဒကတက်တယ်။ “ အာရှတိုက်ထဲ လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်အောင် အားထုတ်နေမှုက စစ်အေးလွန်ကမ္ဘာမှာ အနောက်ရဲ့အင်အား ကျဆင်းလာနေတယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေတယ်။ အရှေ့အာရှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှအပေါ် အနောက်ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာ သိသိသာသာ ကြီး ကျဆင်းလာနေတယ်" (Note – 13)
သူပြောတာမှန်ပါတယ်။ အနုမြူကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားတို့ကြားက သဘောတူညီမှု ပျက်ပြားခြင်းကို “ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအားဖြင့် အလျှော့ပေးလိုက်ခြင်း (negociated surrender) ” လို့ စကားလှသုံးလို့ ရနိုင်ပေမယ့်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တရုတ်နဲ့ အခြားအင်အားကြီး နိုင်ငံတွေကို အလျှော့ပေးလိုက်ရတာကတော့ အကြွင်းမဲ့လက်မြှောက်လိုက်ရခြင်း (unconditional surrender) ဖြစ်သွားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း မရှိဘူးဆိုရင် အထူးအခွင့်အရေးပေး ဆက်ဆံမှုကနေ ရပ်ပစ်ရလိမ့်မယ်လို့ တရုတ်ကို ခြိမ်းခြောက်လိုက် ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘေဂျင်း(ပီကင်း) ကိုရောက်တော့ အရှက်ခွဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာ ကလင်တန် အစိုးရအနေနဲ့ ပထမဆုံး ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူ့မှာ အရှက်ပြေ မျက်နှာဆယ်ခွင့် တောင်မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီနောက် အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီကို ရုပ်သိမ်းပြီး အထူးအခွင့်အရေးပေးနိုင်ငံ (MFN= Mast Favored Nation) သတ်မှတ်ချက်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကို တစ်သီးတစ်သန့်စီ ခွဲခြားလိုက်ရတော့တယ်။
တရုတ်ကတော့ ဒီအားနည်းချက်ကို အမိအရယူပြီး ကလင်တန်အစိုးရ ကန့်ကွက်မှုတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုရင်း ပုံမှန်ပဲ လုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူက အမေရိကန်လူမျိုးကို ကြိမ်ဒဏ်ပေးမှု၊ အရှေ့တီမောတွေအပေါ် အင်ဒိုနီးရှားက အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာ လည်း ကလင်တန် အစိုးရဟာ အလားတူကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အနောက်ကပေးလာတဲ့ ဖိအားတွေကို အာရှအစိုးရတွေက တွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုရာမှာ အချက်အလက် အများကြီးအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ စီးပွားရေးသမားတွေက အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့ အာရှမှာ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လျက် ရှိကြပြီး ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ အာရှစီးပွားရေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် ဖိအားတွေ မပေးမိစေဖို့ အစိုးရတွေအပေါ် ဖိအားတွေ ပြန်ပိနေစေတယ်။ ဒါတွေအပြင် အာရှနိုင်ငံတွေက အနောက်အစိုးရ တွေအနေနဲ့ အဲသလိုဖိအားတွေ ပေးနေခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်းလို့ လက်ခံထားကြပြီး အရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်လာတိုင်း တစ်နိုင်ငံကိုတစ်နိုင်ငံ ထောက်ခံကြရင်း (တညီတစ်ညွတ်တည်း) တစ်သွေးတစ်ယောင်တည်း ရှိနေတတ်တယ်။ တရုတ်ပြည်ထဲမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်နဲ့ ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးသမားတွေက တရုတ်ပြည်ကို အမေရိကန်ရဲ့ အထူးအခွင့်အရေးပေးနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်လက်တည်ရှိနေရေးကို အကြီးအကျယ်လိုလားကြတယ်။ ဂျပန်အစိုးရက အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးပေါ်လစီကနေ ခပ်ခွာခွာနေလာခဲ့တယ်။ တီယန်နန်မင် အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာပဲ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ကီချီမီယာဇာဝါ ( Kiichi Miyazawa ) က လူ့အခွင့်အရေးသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် သူတို့နဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အဆက်အဆံ အပျက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားလို နိုင်ငံတွေကလည်း အားကောင်းလာတဲ့ စီးပွားရေး အင်အားကြောင့် သူတို့ အပေါ် ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တဲ့၊ သူတို့တားမြစ်ထားမှုတွေကို လွန်ကျူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် တန်ပြန် ပေါ်လစီတွေ ကျင့်သုံးလာနိုင်တယ်။ (Note 14)
ယေဘူယျအားဖြင့် စီးပွားရေး အင်အား တိုးတက်လာမှုဟာ လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အနောက်ကပေးလာတဲ့ ဖိအားတွေကနေ ပိုမို လွတ်မြောက်ဖို့ ဖန်တီးပေးလာတယ်။ ၁၉၉၄ - ခုနှစ်မှာ ရစ် ချက် နစ်(က်)ဆင် ( Richard Nircon ) က “ဒီနေ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အင်အားက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တရုတ်ကိုပေးနေတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ သင်ခန်းစာဟာ မဆင်မချင် ပြုလုပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်နေပြီး နောက်ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ ပြသလာလိမ့်မယ်” လို့ မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ (Note 15)
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် တရုတ်စီးပွားရေး အင်အား တိုးတက်လာမှုကြောင့် အနောက်တိုင်း သင်ခန်းစာတွေဟာ တရုတ်အတွက် လုံးဝမလိုအပ်ဘဲ ပေးခဲ့တာတွေဆိုတာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးအင် အားတောင့်တင်းလာမှုကြောင့် အနောက် အစိုးရတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အာရှအစိုးရတွေကို ပိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။ ရေရှည်မှာဆိုရင် အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်း ပို အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အာရှလူချမ်းသာ၊ လူ့လတ်တန်းစားတွေက ဒီမိုကရေစီကို လိုလိုလားလား ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် အားကောင်းလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(မှတ်ချက်။ ။စာမျက်နှာ အချို့ ကျော်ထားသည်။ - အက်ဒမင်)
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/21/2014 - No comments
ဒီနေ့ကင်တင်းဆိုတဲ့ မြို့လေးကိုရောက်တယ်။ ထိုင်ပေနဲ့ကင်တင်းက ရန်ကုန်နဲ့မြစ်ကြီးနားလိုပါ ဟိုထိပ် ဒီထိပ် ။ ၁၁ နာရီခွဲလို့ ရက်စတောရင့် အသေးစားလေးထဲရောက် ..မျက်လုံးဝေ့ပြီးကြည့်လိုက်စဉ်မှာ နံရံက ပိုစတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စုတို့ပုံ။
ဒါ -မြန်မာဆိုင်။ ခဏနေတော့ ဆိုင်ပိုင်ရှင် မမို့မို့ထွက်လာပြီး စကားလာပြောတယ်။ သူကလေသံနဲနဲဝဲတယ် ။ နောက် (၁၀)မိနစ်လောင်နေတော့ သူ့အမျိုးသား ကိုထွန်းအောင်ကျော် ထွက်လာပြီး စကားပြောတယ်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့မြန်မာစကားက ပါဖက်ပဲ။
သူတို့တော်တော်ပျော်သွားပုံပဲ။ ထိုင်ပေမှာ မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ့ရတတ်ပေမယ့် ကင်တင်းမှာတော့တွေ့ဖို့ခက်နေပြီ။ တစ်မိသားစုလုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ပြီးကန်တော့နေကြလို့ စလုံး(၃၄)ယောက်ရော အားလုံးမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ ဒါကမြန်မာပါပဲ။ ဘယ်ရောက်ရောက်။
စားသောက်ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာက ပိုစတာပါ။ ဒါနဲ့အပြေးအလွှားသွားပြီးဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ် (ပုံက မလှဘူး ။ လှစရာလည်းမလိုဘူး။) ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့။ အမှတ်တရ နားဝင်မချိုစာအုပ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်က ထိုင်းမှာ အနှစ် (၂၀)။ ထိုင်ဝမ်မှာ(၇) နှစ် ။ကြည့် ။ သူတို့သွေးထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ရှိတယ် ။ ဒေါ်စုရှိတယ် ။
ပြန်ခါနီးလက်အုပ်ချီနေလို့ မလိုပါဘူး ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဆိုပြီး သူ့လက်အုပ်ကိုဖယ် သူ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်ထားခဲ့တယ်။
"တနေ့နေ့ မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ဆုံရအောင်ဗျာ" လို့
မှတ်မှတ်ရရ ဘာဟင်းနဲ့စားရလို့ ဘယ်လိုစားပြီးမှန်း မသိလိုက်ဘူး။
China is too big for everyone
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/21/2014 - No comments
We stayed in the Luminous Hot Spring Resort and Spa Hotel in Taitung last night. As far as I know, 95% tourists stayed in this hotel are from main China. (It means all are Chinese except 35 of us.)
Buffet breakfast is available at7am. I thought people would be taking breakfast in different times. I realized that was wrong when I saw all Chinese came down for breakfast at 7. Withinafew minutes, all foods were gone. Singaporeans are known as fast mover. But not really compare to Chinese from main China. It was the first time I encountered that too many people were having breakfast at the same time. In short, I could not get what I want to take.(feeling unhappy? Not really. I just realized that Chinese are too many)
In fact, China is too big to Singapore, Taiwan and even to USA. Let alone Myanmar.
I just worry nothing left for us if they come in, just like buffet breakfast this morning!
It is China something need to handle with care. Not because of other reasons, just simply because it is too big to everyone.
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းစုံ အရေးအခင်းများ - (5)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/21/2014 - No comments
စစ်အေးကာလအတွင်းက အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်တို့ဟာ သမိုင်းဝင်လက်နက် အပြိုင်အဆိုင် တပ်ဆင် ခဲ့ကြပြီး နည်းပညာအရ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ အနုမြူလက်နက်တွေ၊ သူတို့ကို သယ်ဆောင် နိုင်မည့် ယာဉ်တွေ ကိုလည်း အဆင့်မြင့်နိုင်သမျှ မြင့်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ အားပြိုင်မှုဟာ လက်နက်အပြိုင်အဆိုင် တပ်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အေးလွန်ကာလရဲ့ လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုက တစ်မူထူးခြားနေပါတယ်။ အနောက်ကို ကြည့်မရတဲ့နိုင်ငံတွေက အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ အနောက်က လည်း ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေ အထမမြောက်ဖို့ ကြိုးစားဟန့်တားနေပါတယ်။ ဒီတော့ လက်ရှိအနေအထားက အပြန်အလှန်တပ်ဆင်နေခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ တပ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားသူနဲ့ ဟန့်တားဖို့ ကြိုးစားသူတို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ အနောက်ရဲ့ အနုမြူလက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က စကားနိုင်လု ပြောနေကြတာကလွဲရင် လက်ရှိယှဉ်ပြိုင်မှုထဲမှာ ပါတောင်မပါဝင်ပါဘူး။ လက်နက်အပြိုင်အဆိုင်တပ်ဆင်မှုရဲ့ ရလာဒ်က နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေ ၊ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နည်းပညာအားပြိုင်မှုတွေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့နှိုင်းစာရင် တပ်ဆင်သူနဲ့ ဟန့်တားသူတွေရဲ့ကြားက ရလာဒ် ကို ခန့်မှန်းဖို့က ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဟန့်တားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အနောက်ကြောင့် သူတို့လက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေ နှေးကွေးကောင်း နှေးကွေးသွားနိုင်ပေမယ့် ရပ်တန့်ပစ်လိုက် ကြမယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အနောက်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု၊ အနောက်နိုင်ငံတွေရော အနောက်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကပါလက်နက်တွေ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုတွေကို ရောင်းချပြီး ငွေရှာလိုတဲ့ဆန္ဒ ၊ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းပဓာနနိုင်ငံတွေနဲ့ ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက သူတို့လူမျိုးစုတွေကို အကာအကွယ် ပေးလိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား၊ ဒါတွေအားလုံးက ဟန့်တားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အနောက်ရဲ့ အားထုတ်မှုကို ကပျက်ယပျက် ဖြစ်စေပါတယ်။
လက်နက်ထိန်းချုပ်မှုဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းထဲက နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ အကျိုး စီးပွားနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လို့ အနောက်အုပ်စုက ရှေ့တန်းတင်ပြောနေချိန်မှာ အနောက်မဟုတ်တဲ့ အခြား နိုင်ငံတွေကတော့ ဒါဟာ အနောက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ လက်နက်ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အခြေခံပြီး အနောက် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိပါးလာနိုင်စရာရှိတဲ့ ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ပုံတွေကလည်း မတူညီကြဘူး။ ကိုးရီးယားကိုကြည့်ရင် ဒီအချက်က ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာ ရှိပါတယ်။
၁၉၉၃- ခုနဲ့ ၁၉၉၄- ခုနှစ်တွေမှာ မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ အနုမြူလက်နက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန်တွေ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။သမ္မတကလင်တန်က ၁၉၉၃-ခု နိုဝင်ဘာလထဲမှာ“ အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်သည်အထိ မြောက်ကိုးရီးယားကို လွှတ်ထားလို့ မရဘူး။ ဒီအတွက် ရပ်တည်ချက် အများကြီး ခိုင်မာကြရမယ်” လို့ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောခဲ့တယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ဘု(ရှ်) အစိုးရရဲ့ အရာရှိဟောင်းတွေကလည်း လက်ဦးမှုရယူပြီး မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ အနုမြူဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်တွေ စိုးရိမ်ပူပန်တာက တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်နက်ပျံ့ပွားမှုနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ (မြောက်ကိုးရီးယားက အနုမြူပိုင်ဆိုင်သွားလို့) အရှေ့အာရှအတွင်း အမေရိကန်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတွက် အကျပ်ရိုက်စေနိုင်တာကြောင့် တင်မဟုတ်ဘဲ တကယ်လို့သာ မြောက်ကိုးရီးယားက အနုမြူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေ အနုမြူလက် နက်တွေကို အခြားနိုင်ငံတွေကိုပါ ရောင်းချလိုက်ရင် အရှေ့အာရှနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေအထိ ထိခိုက်မှုရှိသွားနိုင်လို့ ( ပူပန်နေကြတာပါ)။
ဒါပေမယ့် တောင်ကိုးရီးယားကတော့ မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ အနုမြူလက်နက်ကို ဒေသတွင်း အကျိုးစီးပွား အတွက်လို့ ရှုမြင်တယ်။ တောင်ကိုးရီးယားအများစုက မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ အနုမြူဗုံးဟာ ကိုးရီးယား ( တောင်ရော မြောက်ပါ ) ရဲ့ ဗုံးလို့ ယူဆကြတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားက အနုမြူလက်နက်ကို တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးမှာမဟုတ်ဘူး၊ သုံးခြင်းသုံးရင် ကိုးရီးယားလွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဂျပန်၊ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ရန်စကျူးကျော်မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
တောင်ကိုးရီးယား အရပ်ဖက်နဲ့ စစ်ဖက်အရာရှိတွေက တောင်မြောက်ပေါင်းစည်းမိသွားတဲ့ ကိုးရီးယားမှာ အနုမြူစွမ်းအင် ပိုင်ဆိုင်နေဖို့လည်း မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားက ငွေကုန်ကြေးကျခံ၊ အပြစ်တင်ခံပြီး ဗုံးရအောင်တီထွင်၊ ဒီလက်နက်ကို တောင်ကိုးရီးယားက နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မယ်။ မြောက်ပိုင်းက အနုမြူ လက်နက် စွမ်းအင်နဲ့ တောင်ပိုင်းက စက်မှုစီးပွားစွမ်းအင် ပေါင်းစပ်မိသွားရင် အရှေ့အာရှမှာ အဓိက အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ (၁၉၉၄) ခုနှစ်မှာ မြောက်ကိုးရီးယား ကျွန်းဆွယ်အတွင်း ပြဿနာတက်နေပြီလို့ ဝါရှင်တန်က ယူဆနေချိန် ဆိုး(လ်)ကတော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိသလို သဘောထားခဲ့တယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ မြို့တော်နှစ်ခုကြားမှာ “ပူပန်ပုံ မတူညီခြင်း-Panic gap” ဖြစ်ပွားတော့တယ်။ ၁၉၉၄-ခု ဂျွန်လထဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အနုမြူပြဿနာ အကျပ်အရိုက်ဆုံး အခြေအနေကို ဂျာနယ်လစ်(ဇ်) တစ်ယောက်က ဒီလို သုံးသပ်တယ်။ “အနုမြူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားစဉ် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့ တစ်မူထူးခြားမှုတွေထဲမှာ တစ်ခုကတော့ တစ်ပူပေါ်တစ်ပူဆင့်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ”အရှေ့အာရှမှာလည်း အမေရိကန်တွေနဲ့ ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြား စိုးရိမ်မှုမတူညီခြင်း ပြဿနာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနုမြူလက်နက် ပျံ့ပွားမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန်တွေက ဒေသတွင်း အနုမြူ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထက် ပိုပြီး ပူပန်နေကြတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့က သူတို့ချင်း အနုမြူအန္တရာယ်ကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် အမေရိကန်တွေ အကြံပြုတဲ့ အနုမြူစွမ်းအင် ကန့်သတ်ဖို့၊ လျှော့ချဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အနုမြူအားလုံး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ဆိုတာကို လက်ခံလို့ မရဘူး ဖြစ်နေကြတယ်။ (Note – 10)
အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေပျံ့ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေး ကြိုးပမ်းချက်ဟာ ဆက်လက်ရှိနေဦးမယ့် သဘောရှိသလို အောင်မြင်မှုလည်း သိပ်ရှိလှမယ် မဟုတ်ဘူး။ မြောက်ကိုးရီးယားကို အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မပြုသင့်ဘူးလို့ သမ္မတ ကလင်တန် ပြောအပြီး တစ်လအကြာမှာ အမေရိကန် ထောက်လှန်းရေး အေဂျင်စီက မြောက်ကိုးရီးယားမှာ အနုမြူဗုံး တစ်လုံး၊ နှစ်လုံးအထိတောင် ရှိနေနိုင်ပြီလို့ သတင်းပို့ခဲ့တယ်။ (Note–11) အဲဒီနောက် မြောက်ကိုးရီးယားအပေါ် ထားရှိတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီကလည်း ဒဏ်ပေးစနစ်ကနေ ဆုပေးစနစ်ကို ပြောင်းသွားပြီး အနုမြူလက်နက် မတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ပဲ နားချကြတော့တယ်။ အလားတူပဲ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့ရဲ့ အနုမြူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းကို မရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သလို အီရန်ရဲ့ အနုမြူအစီအစဉ်ကိုလည်း မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၁၉၉၅ - ခု၊ ဧပြီလထဲမှာ ကျင်းပတဲ့ အနုမြူလက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူညီမှု (Nuclear Nonproliferation Treaty) ကွန်ဖရင့်မှာလည်း လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူညီမှု စာချုပ်ကို နှစ်အကန့် အသတ်မရှိ သတ်မှတ်မလား၊ ၂၅ နှစ် သတ်မှတ်မလားဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အဓိက ဆွေးနွေးစရာ ကိစ္စဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့သတ်မှတ်ရေးအဆိုကို အမေရိကန်တွေက ဦးဆောင်တင်ပြတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ အများစုကတော့ လက်ရှိ အနုမြူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အင်အားကြီးငါးနိုင်ငံက သူတို့ရဲ့ အနုမြူစွမ်းအင်ကို သိသိသာသာကြီး လျှော့ချမှု မလုပ်ဘူးဆိုရင် သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလာကြတယ်။ ဒါ့ အပြင် အီဂျစ်ကလည်း ဒီသဘောတူညီမှုကို အစ္စရေးပါ လက်မှတ်ထိုးပြီး လုံခြုံရေးအတွက် ထောက်လှန်းစစ်ဆေးမှုကို လက်ခံမှ သဘောတူနိုင်မယ်လို့ ဆိုလာပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လက်သိပ်ထိုး စည်းရုံးမှု၊ လာဘ်ပေးမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ မဟာဗျူဟာတွေကို အသုံးချပြီး နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့သတ်မှတ်မှု အဆိုအတွက် အမေရိကန်တွေ အနိုင်ရလိုက်ကြတယ်။ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့သတ်မှတ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ အီဂျစ်နဲ့ မက္ကစီကိုနိုင်ငံတွေကလည်း စီးပွားရေးမှာ အမေရိကန်တွေအပေါ် မှီခို နေရလေတော့ လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။ အများစု သဘောတူညီမှုအရ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့သတ်မှတ် ချက်ကို သဘောတူခဲ့ကြပေမယ့် မွတ်စလင် (၇) နိုင်ငံ (ဆီးရီးယား၊ ဂျော်ဒန်၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ လစ်ဗျား၊ အီဂျစ်နဲ့ မလေးရှား) အာဖရိက တစ်နိုင်ငံ ( နိုင်ဂျီးရီးယား) တို့ကတော့ နောက်ဆုံးစကား လက်ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောမတူကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြတယ်။ (Note – 12)
အမေရိကန်တွေချမှတ်တဲ့ ပေါ်လစီအတိုင်း ၁၉၉၃ - ခုနှစ်ရောက်တော့ အနောက်ရဲ့ပေါ်လစီက လက်နက် ထိန်းချုပ်ရေးကနေ လက်နက်ပြန့်ပွားမှု တန်ပြန် ထောက်လှမ်းရေး ( Nonproliferation to Counterproliferation ) ပေါ်လစီကို ပြောင်းသွားတယ်။ အနုမြူပြန့်ပွားနေမှုက ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ကိစ္စမို့ ဒီပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲက လက်တွေ့ကျပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် လက်နက်ပြန့်ပွားမှုကို ထောက်လှန်းရေးပေါ်လစီကနေ လက်နက်ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်အသုံးပြုရေးပေါ်လစီအထိတောင် ဆက်လက်ပြောင်းသွားစရာရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၉၅ - ခုနှစ်အထိ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်အုပ်စုဟာ လက်နက်ပြန့်ပွားမှု ဟန်တား ရေး (hold-down) ပေါ်လစီကို လက်ကိုင်ထားကြဆဲ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ကျရှုံးဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အနုမြူနဲ့ အခြားဖျက်စီးရေး လက်နက်ကြီးတွေ ပြန့်ပွားနေမှုဟာ အချိန်ဆွဲထားလို့သာ ရပြီး စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းစုံ ကမ္ဘာမှာ ဒီလက်နက်တွေ ပြန့်ပွားမှု ကို လုံးဝ တားဆီးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/20/2014 - No comments
1) Taiwan has 1% of Muslim population.
2) No driver is allowed to let his car engine on longer than three minute without driving. (If one enjoys A.C in his car unless driving, it is against the law.)
3) Most of Ph.d graduates from the West Universities come back to their mother land, Taiwan.
(So the third fact makes my conclusion even stronger"Taiwan has stronger domestic power.")
Hard working monk in Taiwan
ဆရာထက် တပည့် လက်စောင်းထက်
in ပြုံးစိစိ, ဦးကိုမောင်, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 10/20/2014 - No comments
တစ်ခါက စာချကိုယ်တော်လေးတစ်ပါးဟာ သူ့တပည့်ကိုရင်လေးတွေကို အဘိဓမ္မာသရုပ်ခွဲ တွေကို သင်နေသတဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုရင်လေးတွေက ဆရာ့အာဘော်ကို မမှီဘူးဖြစ်တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် အားမလိုအားမရဖြစ်နေရင်းနဲ့-
“ကိုရင်တို့၊ မင်းတို့က ဆရာပြောရင် ပြောတာလေးပဲ မှတ်ထားကြတာကိုး။ တပည့်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာပြောတာထက် ကျော်မြင်နေရတယ်။ တစ်ချို့တော်တဲ့ တပည့်တွေ ဆိုတစ်ထွာ လောက်ပြလိုက်တာနဲ့ တစ်လံကို မြင်တာ”
“ ဟဲ့ ကိုရင်တိက္ခ၊ လောကီစိတ် ဘယ်နှစ်ပါးရှိသလဲ”
“ လောကီစိတ် (၈၂) ပါးပါဘုရား”
“ တယ် ဒီကိုရင်လေ၊ ကိုရင်ဉာဏ ဖြေစမ်း”
ကိုရင်ဉာဏက စဉ်းစားတာပေါ့။ ကိုရင်တိက္ခက ဆရာသင်တာထက် ကျော်မြင်ပေမယ့် နည်းနည်းပဲကျော်မြင်နိုင်တယ်။ သူက ကိုရင်တိက္ခထက် ပိုကျော်မြင်လိုက်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီး-
“လောကီစိတ် (၈၃) ပါးပါဘုရား” လို့ ဖြေလိုက်ချိန်မှာတော့ စာချဆရာတော်လေး တော်တော်စိတ်ပျက်သွားသတဲ့။ ပြီးတော့မှ သူပြောမိတဲ့ စကားကို သတိရပြီး စိတ်ပြေသွားလို့-
“ကိုရင်ဉာဏ၊ မင်းတို့ကို သဒ္ဒါသင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော် ဘယ်ကြွသွားသလဲ” လို့ မေးလိုက်ချိန်မှာတော့-
“ ဆရာတော် ရေနီမြောင်းထဲ ကြွသွားပါတယ်ဘုရား” တဲ့။
(မန္တလေးနဲ့ ဝေးတဲ့လူတွေက သိမှာမဟုတ်ဘူး။ မန္တလေး တက္ကသိုလ်ကိုကျော်ရင် ရေနီမြောင်းကို ရောက်တယ်လေ။ ဆရာပြောတဲ့စကားကို ကျော်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ ကိုရင်ဉာဏက ကျော်မြင်လိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ သဒ္ဒါသင်ပေးတဲ့ဆရာတော်က မန္တလေးတက္ကသိုလ်ထဲကို ဆွမ်းစားကြွသွားတာ။
အဲလောကီစိတ်ဆိုတာကလည်း (၈၁) ပါးပဲရှိတာပါ။ ဆရာပြောတာကို ကိုရင်တိက္ခက တစ်ပါးကျော်မြင်ပြီး၊ ကိုရင်ဉာဏက နှစ်ပါးကျော်မြင်ပစ်လိုက်တာပါ။)
ဆရာတော်လေးလည်း ရယ်ချင်တာနဲ့ စာဆက်မချတော့ပဲ-
“ ကိုရင်တို့ သွားကြတော့၊ နောက်မှ ဆက်တော့မယ်” လို့ မိန့်လိုက်ရသတဲ့။
ဒါတောင် ကိုရင်ဉာဏက ကျော်မြင်လိုက်သေးတယ်။ “ငါ့ဆရာလည်း ကွမ်းဝါးတော့မယ်” လို့တဲ့။ ကိုရင်ဉာဏတို့ကတော့ တကယ့်ကိုမလွယ်။
(posted on 1/08/2012)
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းစုံ အရေးအခင်းများ - (4)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/20/2014 - No comments
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်ဆီးရေးလက်နက်ကြီးတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ပါကစ္စတန်နဲ့ အီရန်ကို တရုတ်ပြည်ရဲ့ အလွန်အမင်း အကူအညီတွေ ပေးနေပုံကိုကြည့်ရင် သူတို့သုံးနိုင်ငံအတွင်း သမားရိုးကျ အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်နေတယ်။
သူတို့ချင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ တိုးပွားလာခြင်း၊ အနောက်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ခြေ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ပြန့်ပွားလာနေ မှု ကိစ္စဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (ဟန်တင်တန်)
လက်နက်ပြန့်ပွားမှုကိစ္စက ကွန်ဖြူးရှပ် အစ္စလာမ် ဆက်သွယ်ရေးကြားမှာ ပိုပြီး ပြင်းထန်သလို ပိုပြီးလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေတယ်။ မွတ်စလင်နိုင်ငံ အများအပြားဆီ သမားရိုးကျ လက်နက်တွေရော အနုမြူဆိုင်ရာ လက်နက်တွေကိုပါ ဖြန့်ဝေရာမှာ တရုတ်က အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတယ်။ တရုတ်ရဲ့ လက်နက် ဖြန့်ဝေရောင်းချမှုဆိုရာမှာ သာမန်ကြည့်ရင် သုတေသနအတွက်။ ဒါပေမဲ့ အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေ ယုံကြည် ထားတာက ရေဒီယိုသတ္ထုကြွဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အဆင့်အထိရှိနိုင်တဲ့ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို အယ်ဂျီးရီးယား ကန္တာရထဲမှာ တည်ဆောက်မှု၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံအတွက် အလက်စားဒုံးကျည် CSS-2 ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ အီရတ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားနှင့် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွေကို အနုမြူ နည်းပညာနဲ့ အထောက်အကူ ပစ္စည်းတွေကို ကူညီပံ့ပိုးပေးမှု၊ သမား ရိုးကျ စစ်လက်နက် အများအပြား အီရက်နိုင်ငံကို ရောင်းချမှုတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့လက်နက် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စကို ထပ်ဆောင်းပေးတာက မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ Scud–C ဒုံးကျည် အမျိုးအစားတွေကို အီရက်နိုင်ငံကတစ်ဆင့် ဆီးရီးယားကို ရောင်းချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒုံးကျည်တွေ တင်ဆောင်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ယာဉ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။ (Note-6)
ကွန်ဖြူးရှပ်၊ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေ လက်နက်အရောင်းအဝယ် ကွင်းဆက်မှာ အဓိက က တရုတ်ဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာ မြောက်ကိုးရီးယားကတစ်ဖက် ပါကစ္စတန်နဲ့ အီရန်တို့ကတစ်ဖက် ချိတ်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၁-ခုအကြား၊ တရုတ်ဆီက လက်နက်အများဆုံး ဝယ်ယူသူတွေဟာ အီရန်နှင့် ပါကစ္စတန်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နောက်မှာက အီရတ်ပါ။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေကစပြီး တရုတ်နှင့် ပါကစ္စတန် တို့ရဲ့ စစ်ရေးဆက်ဆံမှုက အလွန်အမင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ နှစ်နိုင်ငံဟာ လက်နက်အရောင်း အဝယ်ကိစ္စမှာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲသုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ဆောင်ရေး၊ ပူးတွဲ လက်နက်ထုတ်လုပ် ရေး၊ နည်းပညာများ အပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေး၊ နှစ်ဖက်သဘောတူညီနဲ့ တတိယနိုင်ငံကို လက်နက်ရောင်းချရေး သဘောတူညီမှု ဆယ်နှစ်စာချုပ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲသဘောတူညီမှု အနေနဲ့ ပါကစ္စတန်က လက်နက်ဝယ်ယူရာမှာ တရုတ်ကအကြွေးပေးဖို့ သဘောတူညီမှု ၁၉၉၃-ခုမှာ လက်မှတ် ထိုးခဲ့တယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ “ တရုတ်ဟာ ပါကစ္စတန်ရဲ့ စိတ်အချရဆုံးနဲ့ အများဆုံး စစ်လက်နက် အကြမ်းထည်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး စစ်တပ်နဲ့ သတ်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါကစ္စတန်စစ်တပ်တွင်း တပ်ခွဲတိုင်းအတွက် လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပေးတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက် တိုက်လေယဉ်တွေ၊ တင့်ကားတွေ၊ အမြောက်လက်နက်တွေ၊ ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေ တရုတ်က ပါကစ္စတန်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြန်တယ်။
ယူရေနီယံဓာတ် ပွားများလာရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း ဗုံးဒီဇိုင်းအတွက် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ သူတို့ရဲ့ အနုမြူစမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာ အနုမြူဖောက်ခွဲစမ်းသပ်ခွင့်ပြုခြင်း စတဲ့ အနုမြူစွမ်းအင်တိုးတက်ရေး ကိစ္စတွေမှာ ပါကစ္စတန်ကို တရုတ်က အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်ကို ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အကွာအထိ ပစ်နိုင်တဲ့ အဝေးထိန်းဒုံးကျည် M–11 ကိုလည်း ရောင်းချခဲ့တယ်။ ဒီဒုံးကျည်တွေဟာ အနုမြူလက်နက် အဖြစ်တောင် အသုံးပြုရနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ပါကစ္စတန်ဆီက ကောင်းကင်မှာ ဆီဖြည့်ခြင်းနည်းပညာနဲ့ စတင်းဂါးဒုံးကျည်တွေ တရုတ်ကိုယ်တိုင် ရရှိခဲ့တယ်။ (Note–7)
၁၉၉၀- ခုနှစ်တွေမှာ တရုတ်နဲ့ အီရန်တို့ အကြား လက်နက်အရောင်းအဝယ်ကိစ္စကလည်း ခြေသွက်လက်သွက် ရှိနေခဲ့တယ်။ ၁၉၈၀- ခုနှစ်တွေအတွင်းက အီရန်အီရတ်စစ်ပွဲကာလမှာ အီရန်ရဲ့ လက်နက်ဝယ်ယူမှု ( ၂၂ ) ရာခိုင်နှုန်းက တရုတ်ဆီမှဖြစ်ပြီး ၁၉၈၉ - ခုနှစ်ရောက်တော့ တစ်ဦးတည်း လက်နက်အများဆုံး ရောင်းချပေးသူ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး အနုမြူပိုင်ဆိုင်ရေးကို လူသိရှင်ကြား ကြော်ငြာခဲ့ပြီး အနုမြူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အီရန်ကို တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီခဲ့ပြန်တယ်။ တရုတ်-အီရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပဏာမသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက် သူတို့နှစ်နိူင်ငံဟာ ၁၉၉၀ - ခု ဇန်နဝါရီ လထဲမှာ သိပ္ပံပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ စစ်ရေးနည်းပညာများ အပြန်အလှန် လဲလှယ်ရေး ဆယ်နှစ်ကြာ နားလည်မှု စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြန်တယ်။
၁၉၉၂ - ခု စက်တင်ဘာလရောက်တော့ အီရန်သမ္မတ ရပ်(ဖ်)ဆန်ဂျာနီ ( Rafsanjani ) ဟာ အီရန် အနုမြူ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပါကစ္စတန်ကနေတစ်ဆင့် တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ပြီး အနုမြူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးအတွက် သဘောတူညီမှု စာချုပ်အသစ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြန်တယ်။ ၁၉၉၃ - ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလရောက်တော့ မီဂါဝပ် ၃၀၀ ရှိတဲ့ (300 – MW ) အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို အီရန်နိုင်ငံထဲမှာ တည် ဆောက်ခဲ့တယ်။ ဒီသဘောတူညီမှု့နှင့်အညီ အနုမြူနည်းပညာနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အီရန်ကို မျှဝေပေးခဲ့တယ်။ အီရန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်။ ကယ်(လ်) ထရွန်ဓာတ် တိုးပွားစေနိူင်တဲ့ အထောက်အကူ ပစ္စည်းကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ ၁၉၉၅ - ခုနှစ်မှာ တော့ အဆက်မပြက်ပေးနေတဲ့ အမေရိကန်တွေဖက်က ဖိအားကြောင့် သုံးရာမီဂါဝပ်ရှိ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ရောင်းချရေးအစီအစဉ်ကို (အမေရိကန်တွေအဆိုအရ) “ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ”် (တရုတ် တို့အဆိုအရ) “ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။” ။
နောက်ပြီး ဒုံးကျည်နဲ့ ဒုံးကျည်နည်းပညာတွေ အီရန်ကိုရောင်းချရာမှာလည်း တရုတ်ဟာ အဓိက နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၀ - ခု နှောင်းပိုင်းတွေထဲမှာ မြောက်ကိုးရီးကနေတစ်ဆင့် Silkworm ဒုံးကျည်တွေ ရောင်းချခဲ့သလို ဒါဇင်ပေါင်း(သို့) ရာပေါင်းများစွာသော ဒုံးကျည်ထိန်းချုပ်နည်းစနစ်တွေနဲ့ ကွန်ပြူတာ ထိန်း စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ၁၉၉၄ နဲ့ ၁၉၉၅ - ခု အကြားမှာ ရောင်းချပေးခဲ့တယ်။ မြေပြင်ပစ် တရုတ် ဒုံးကျည်တွေ အီရန်နိုင်ငံထဲမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုင်စင်လည်း တရုတ်ကချပေးခဲ့တယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားက လည်း Scud ဒုံးကျည်တွေ အီရန်ထဲတင်ပို့ခဲ့သလို သူတို့ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ဖို့ အကူအညီတွေလည်း ပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၉၃ - ခုနှစ်မှာ မီတာ(၆၀၀) အကွာအဝေးအထိ ပစ်ခတ်နိူင်တဲ့ ဒုံးကျည်တွေရောင်းချပေးဖို့ သဘော တူခဲ့တယ်။
သူတို့သုံးနိုင်ငံ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံရာမှာတော့ အီရန်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကလည်း အနုမြူကိစ္စမှာ ပါ ဝင်ပူးပေါင်းမှု့ ပိုများလာခဲ့ကြသလို ပါကစ္စတန်က အီရန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ အနုမြူစီမံကိန်းတွေမှာ အတူတကွ လက်တွဲအလုပ်လုပ်သွားကြဖို့ ၁၉၉၂ - ခုနှစ်မှာ ပါကစ္စတန်၊ အီရန်နဲ့ တရုတ်တို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ (Note-8) အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်ဆီးရေးလက်နက်ကြီးတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ပါကစ္စတန်နဲ့ အီရန်ကို တရုတ်ပြည်ရဲ့ အလွန်အမင်း အကူအညီတွေ ပေးနေပုံကိုကြည့်ရင် သူတို့သုံးနိုင်ငံအတွင်း သမားရိုးကျ အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်နေတယ်။
သူတို့ချင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ တိုးပွားလာခြင်း၊ အနောက်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ခြေ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ပြန့်ပွားလာနေ မှု ကိစ္စဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ၁၉၉၀ - ခု ၅၉ ရာခိုင်နှုန်း အမေရိကန်လူထုက အနုမြူလက်နက် ပြန့်ပွားမှုကို တားမြစ်ခြင်းဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူကြတယ်။ ၁၉၉၄ - ခု ရောက်တော့ လူထုရဲ့ ၈၂- ရာခိုင်နှုန်း ၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒခေါင်းဆောင် ( ၉၀ ) ရာခိုင်နှုန်းက အထက်ပါအတိုင်း ခံယူလာကြတယ်။ ၁၉၉၃- ခု စက်တင်ဘာလမှာ လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စဟာ အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတကလင်တန်က အသားပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ၁၉၉၄- ခုဆောင်းဦးပေါက် ကာလရောက်တော့ “ နျူကလီးယား လက်နက်၊ ဇီဝလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက်တွေနဲ့ ဒီလက်နက်တွေ အသုံး ချဖို့ နည်းလမ်းတွေ ပြန့်ပွား လာနေခြင်း အားဖြင့်” “အမေရိကန်ရဲ့ လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီနဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကို ခြိမ်းခြောက်လာ နေတဲ့အတွက် ” ဒီကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးဟာ “တစ်မျိုးသား လုံးရဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စ ” ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့တယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ထဲမှာ အမေရိကန်ထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့ (CIA) က ဝန်ထမ်းတစ်ရာရှိတဲ့ လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး ဌာနချုပ်ကို ( Nonproliperation Center) ကို တည်ထောင်လိုက်ပြီး ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင်ဘာလထဲရောက်တော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အက်စ်ပင် (Aspin) က လက်နက်ပြန့်ပွားမှု့ တန်ပြန် ထောက်လှန်းရေး စတင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးဗျူဟာအသစ်ကို ကြေ ငြာခဲ့ပြီး အနုမြူလက်နက်လုံခြုံရေးနဲ့ လက်နက်ပြန့်ပွားမှု တန်ပြန်ထောက်လှန်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေး ဒု ဝန်ကြီးရာထူး ခန့်အပ်ခြင်းကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်။ (Note – 9)
Taiwan has stronger domestic power than Singapore
in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော် - on 10/19/2014 - No comments
Taiwan has stronger domestic power than Singapore as she has bigger land and more population. Plantations can be seen even in an industrial areas. Whatasurprise in the heavily industrialized country! Americans or Europeans can hardly be seen in tourist sites. But she is vibrant with her own people. Myanmar can learn one or two things from Taiwan. Something old and something gold, something new and something blue theory is still existing in Tiawan.
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းစုံ အရေးအခင်းများ - (3)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 10/19/2014 - No comments
မြောက်ကိုရီးယားတွေရဲ့ စစ်ရေးသဘောထားက “ အမေရိကန်တွေကို စစ်အင်အား စုစည်းချိန် မပေးနဲ့၊ လေကြောင်းတစ်ခွင်ကို မလွှမ်းမိုးမိစေနဲ့၊ သူတို့ လက်ဦးမှု မရရှိစေနဲ့၊ အမေရိကန် အသေအပျောက်နည်းနည်းနဲ့ တိုက်ပွဲမပြီးစေနဲ့ ” ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ သင်္ခန်းစာက ပိုလို့တောင် တိကျနေပါသေးတယ်။ “ နျူးကလီးယားလက်နက်မရှိ ဘဲ အမေရိကန်နဲ့ စစ်မဖြစ်နဲ့ ” (Note-2)
ဒီသင်္ခန်းစာက အနောက်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေပါတယ်။ ဒါတွေကို ခြုံငုံပြီး အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ပြောတော့ “ မင်းမှာ အဏုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ထားရင် အမေရိကန်တွေ လာမတိုက်တော့ဘူး ” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လောရင့် ဖရီးဒ်မန်း ( Lawrence Freedman ) က ဒီလို လေ့လာသုံးသပ်တယ် “ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးစနစ် အကွဲအပြဲကိစ္စမှာ ခါတိုင်းလို နိုင်ငံရေးအင်အား တိုးမြှင့်တာထက် အဏုမြူလက်နက်တွေက ပိုပြီး အခရာ ကျလာတယ်။ အဏုမြူလက်နက်ကြောင့် တစ်ချိန်က အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍလည်း သေးငယ်သွားတယ်၊ စစ်အေးလွန်ကာလ အနောက်တိုင်းရဲ့ အဏုမြူလက်နက်အခန်းကဏ္ဍဟာ စစ်အေးကာလ အတွင်းနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမားရိုးကျစစ်အင်အားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အားနည်းနေတဲ့ အနောက်ရဲ့စစ်အင်အားကို အဏုမြူလက်နက်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ် လို့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဟောင်း လက်(စ်) လက်(စ်)ပင် ( Les Aspin ) က ထောက်ပြခဲ့တယ်။ စစ်အေးကာလတွင်းမှာ အနုမြူလက်နက်တွေဟာ စစ်အင်အားကို ညှိပေးလိုက်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ( The equalizer ) (Note 3)
"ဒါပေမဲ့ စစ်အေးလွန်ကာလထဲမှာတော့ အမေရိကန်ဟာ သမားရိုးကျစစ်အင်အားမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ ယှဉ်လို့ မရအောင် အားကောင်းနေတယ်။ ဒီတော့ အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို စိန်ခေါ်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ စစ်အင်အား တန်းညှိခံရမယ့်သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်လာနေတယ်" လို့ အက်စ်ပင်က ဆက်လက်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ရုရှားက အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်လာတာ၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ယူကရိန်းဆီကနေ ထပ်ဆောင်း အဝေးပစ် ဒုန်းကျည်တွေ၊ ဗုံးကျဲလေယဉ်တွေ ၀ယ်ယူဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာဟာ အံ့သြစရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ “ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက ရုရှားကို ကျွန်တော်တို့က ပြောခဲ့သမျှ အခု သူတို့က ပြန်ပြောနေတာကို ကြားနေရပါတယ်၊ အခု ရုရှားတွေပြောနေတာက ‘ အမေရိကန်တွေရဲ့ သမားရိုးကျ စစ်အင်အားသာလွန်မှုကို ကာမိအောင် အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ လိုတယ်’ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ အမေရိကန် လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်က သုံးသပ်ပြပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ စစ်အေးကာလအတွင်းမှာ အမေရိကန်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့ အနုမြူလက်နက် စတင်မသုံးစွဲရေးဝါဒကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ စစ်အေးလွန် ကာထဲရောက်တော့ ရုရှားကလည်း အနုမြူစတင်မသုံးစွဲရေး ( not- fint-use ) ၀ါဒကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်ပြည်ကလည်း စစ်အေးလွန်ကာလ ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့ အနုမြူနည်းပညာတွေကို တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားလာနေရင်း ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ထားရှိခဲ့တဲ့ အနုမြူစတင်မသုံးစွဲရေး ၀န်ခံကတိက၀တ်အပေါ် မေးခွန်းတွေ ထုတ်လာသလို ဒီအပေါ် အလေးအနက်ထားမှုလည်း လျော့ပါးလာနေတယ်။ (Note-4) သူတို့သာ အနုမြူလက်နက်တွေ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်ဆီးရေး လက်နက်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင် သွားကြမယ်ဆိုရင် အခြားပဓာနနိုင်ငံတွေ၊ ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်း ဒီလမ်းအတိုင်း လိုက်လာ ကြမယ့် အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အနောက်ရဲ့ သမားရိုးကျ စစ်အင်အားသုံးစွဲလာမှုကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ အင်အားအကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားရာ ရောက်ပါတယ်။
အနုမြူလက်နက်တွေဟာ အနောက်ကို တိုက်ရိုက်လည်း ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့မှာ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကအထိရောက်အောင် ပစ်လို့ရတဲ့ နျူးကလီးယားထိပ်ဖူးတပ် အဝေးထိန်း ဒုံးကျည်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီ်။ မြောက်ကိုရီးယား၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ကလည်း ပိုပြီး ဝေးဝေးရောက်အောင် ပစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသလို တစ်ချိန်ချိန်မှာ အနောက်ကို ပစ်ခတ်နိုင်မယ့် အဆင့်အထိ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါအပြင် နျူးကလီးယားလက်နက်ကို အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း အသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်။ စစ်အင်အားကို အထူးပြု လေ့လာသူတွေကတော့ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု၊ ပြောက်ကြားတိုက်ပွဲလို သာမန်စစ်ပွဲ အသေးလေးတွေကနေ အကန့်အသတ်တချို့နဲ့ စစ်ပွဲအလတ်စားတွေ၊ နောက်ဆုံး သမားရိုးကျ စစ်အင်အားကနေ အနုမြူစစ်ပွဲအထိ ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ လေ့လာခန့်မှန်းကြပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေမှာ သမားရိုးကျစစ်အင်အား မပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက် လက်နက်အင်အား မတောင့်တင်းပါဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းက အနုမြူလက်နက်ဟာ သမားရိုးကျ စစ်အင်အား အားနည်းမှုကို ကာမိအောင် ထေပေးတဲ့ လက်နက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်တုန်းကဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ လုပ်နိုင်တယ်၊ ဟိုဟိုဒီဒီက လူနည်းစုကိုပဲ သတ်ဖြတ်နိုင်၊ ပစ္စည်း အနည်းငယ်ကိုသာ ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ စစ်အင်အား လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ လူနည်းစု အကြမ်းဖက်သမားတွေက ကြီးကြီးမားမား အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖျက်ဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ အနုမြူလက်နက် မပူးပေါင်းမိသေးခြင်းဟာ အနောက်မဟုတ်တဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေအတွက် အားနည်းချက်ဖြစ်ပြီး အဲဒီနှစ်ခုသာပေါင်းမိသွားရင် အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
စစ်အေးလွန်ကာလထဲမှာတော့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ကွန်ဖျူးရှပ်နိုင်ငံတွေဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပျက်စီးနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ပိုမိုအားကောင်းလာအောင် ကြိုးစားလာနေကြသလို ဒီလက်နက်တွေ အသုံးပြုဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း တီထွင်ကြံဆလာနေကြတယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ အနုမြူလက်နက် အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်နေပြီး မပိုင်ဆိုင်သေးဘူးဆိုရင်အောင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နောက်ပြီး အဝေးပစ်ဒုန်းကြည်တွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ အသုံးပြုနည်းလမ်းတွေကို ရရှိဖို့ ကြိုးစားရှာဖွေနေကြတယ်။ အီရတ်မှာ ဓာတုလက်နက်စွမ်းရည်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေပြီး ဇီဝလက်နက်နဲ့ အနုမြူလက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်း အသည်းအသန် ကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ အီရန်ကလည်း အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းတွေ အကြီးအကျယ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်နေသလို ဒီလက်နက်တွေ အသုံးပြုရေး နည်းလမ်းတွေကိုလည်း တိုးချဲ့ရှာဖွေ လာနေကြတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ (အီရန်သမ္မတ) ရပ်(စ်)ဆန်ဂျာနီ ( Rafsanjani ) က တိတိလင်းလင်း ကြေငြာခဲ့တယ်။ “ အီရန်တွေဟာ တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရော ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ ဓာတုလက်နက်၊ ဇီဝလက်နက်နဲ့ ရေဒီယို သတ္ထုကြွလက်နက်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တပ်ဆင်ထားကြရမယ်။ ” နောက်သုံးနှစ်ကြာတော့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယသမ္မတက အစ္စလာမ်မစ် အစည်းဝေးမှာ “အစ္စရေးက အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေလည်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး ပေါ်လစီကို ဘေးဖယ်ထားပြီး အနုမြူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ၁၉၉၂ နဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန် ထိပ်တန်းထောက်လှမ်းရေးအရောရှိက အီရန်ဟာ အနုမြူလက်နက် တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုရောက်တော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ၀ါရင့် ခရစ္စတိုဖာ (Worren Christopher ) က “ ဒီနေ့ အီရန်ဟာ အနုမြူလက်နက် တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးမဲ့ အားထုတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေ တယ်” လို့ ဘွင်းဘွင်းကြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အနုမြူလက်နက် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ လစ်ဗျား၊ အယ်(လ်)ဂျီးရီးယား နဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗျတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အလီမာ(ဇ်)ရူးရဲ့ ကဗျာဆန်ဆန်ဝေါဟာရက “ လခြမ်းဟာ မှိုပွင့်သဏ္ဍန် တိမ်တိုက် (မီးခိုးလုံး) ရဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ် ” ဖြစ်ပြီး ( အစ္စလာမ်ကမ္ဘာရဲ့ အနုမြူ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ) အနောက်အပြင် အခြားနိုင်ငံတွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက် နေနိုင်ပါတယ်။ အစ္စလာမ် စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း (ထဲက အနုမြူလက်နက်) ဟာ “အရှေ့အာရှထဲက အိန္ဒိယ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ တစ်ဖက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ဂျူး စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းနဲ့တစ်ဖက် အနုမြူလက်နက် ပစ်ခတ်တမ်း ” ကစားလာနိုင်စရာတောင် ရှိနေပါတယ်။ (Note-5)
Wow! Wow! Wow! The boys made history.
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 10/18/2014 - No comments
It isanice team-play goal too. The nation should be proud of!
The first good news as soon as back to hotel where WIFI is possible in Taiwan.
Hope more to come. Come on boy! Wipe out the Nation's tears.
၂၀၁၄ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် (စင်္ကာပူ)
in ဘာသာရေးသတင်း - on 10/18/2014 - No comments
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန သာသနာရေးဦးစီးဌာန မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ၊ အဘိဓမ္မာ ဂုဏ်ထူးဆောင် နှင့် ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲဆိုင်ရာ ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို မင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်း (30 Jalan Eunos Singapore 419495) တွင် ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
✍ စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက် ✍
အဘိဓမ္မာပထမဆင့် (ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်၊ သောကြာနေ့)
အဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့် (ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်၊ စနေနေ့)
အဘိဓမ္မာတတိယဆင့် (ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့)
စာမေးပွဲကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ စင်ကာပူစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁:၃၀ မှ ညနေ ၅:၃၀ အထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ ။ ။ မင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်း ၊ ဒုတိယထပ် ၊ Chew Quee Neo Hall
အဘိဓမ္မာ နှင့် ၀ိသုဒ္ဓိမဂ် စာမေးပွဲကြေငြာချက်
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ၊ အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်) ၊ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ် ၀င်ခွင့်လက်မှတ်
ဖြေဆိုသူတစ်ဦးလျှင် ဝင်ခွင့်တောင်းခံလွှာ နှင့် ဝင်ခွင့်ကဒ် (၁)စုံ ဖြည့်ရပါမည်။
နေ့ရက် ။ ။ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၁၉ ၊ ၂၅ ၊ ၂၆
အချိန် ။ ။ ညနေ (၅း၀၀) နာရီမှ ည (၉း၀၀) အထိ
အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နေ့လည် (၁၂း၀၀) မှစတင်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖောင်ဖြည့်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ
၂။ ဖြေဆိုမည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်
၃။ ဖြေဆိုမည့်သူ အလုပ်အကိုင်
၄။ ဖြေဆိုမည့်သူ၏ အဘအမည်
၅။ ဖြေဆိုမည့်သူ၏ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ (စင်္ကာပူလိပ်စာ)
၆။ သင်တန်းဆရာတော်အမည်နှင့် သင်တန်းလိပ်စာ
၇။ ၂-လက်မပတ်လည် ဓာတ်ပုံ (၄) ပုံ
(ဝင်ခွင့်ကဒ်တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကပ်၍ ဓာတ်ပုံအလွတ် (၂) ပုံ၏ နောက်ကျောတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ၏အမည်၊ အဘအမည်၊ ဖြေဆိုမည့်စားမေးပွဲကို ထင်ရှားစွာ ရေးသားပေးပို့ရမည်။)
အောက်တိုဘာ (၂၆) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၉း၀၀ နာရီ။
အရှင် စက္ကပါလ (8191 0822)
ဦးအံ့ထူးနိုင် (9025 4909)
ကိုဇော်မျိုးမင်း (9047 9374)
နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး အတွက် စာ...
ဝမ်းလို့ခေါ်တဲ့ သူဌေးလူငယ် တစ်ယောက် တောင်ပေါ်တက်ဆောက...
၂၀၁၄ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် (စ...
စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းစုံ အရေးအခင်းများ - (2)
သီဟနာဒ (သို့မဟုတ်) ဇင်ဝေသော် (By Yay Kyi Chamm Mya...
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အဘိဓမ္မာဆုနှင်းသဘင် (၂ဝ၁၃) ဖိတ်ကြ...
ဒီနေ့ တက်လာတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စတေးတပ်တချို့
တည်ဆောက်ဆဲ နိုင်ငံတော်အတွက် ကိုယ့်နယ်ပယ်နဲ့ကိုယ်ေ...
ပဋိပက္ခကို ချဉ်းကပ်နည်း (ပြန်ချင်သည့် ကွန်မင့်များ)...
ဒီနေ့မနက် "ငွေနဲ့ အရင်းအမြစ်" နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်...
ဒါက အကြမ်းဖက်မှုမဟုတ်သေးဘူး၊ လူပါးဝတာ
ပဝါရဏာ ( သို့ ) ဗုဒ္ဓ၏ ဆိုရှယ် ဆိုင်းယင့်စ်
ဒီဆောင်းပါးဘယ်မှာဆုံးမယ်မသိပေမဲ့ စတော့စလိုက်တယ်။ ဆ...
ဒီနေ့လည်း ဘာသာရေးဆိုင်တဲ့ ခပ်စပ်စပ်မေးခွန်းတစ်ခု တ...
စင်္ကာပူက မြသရဖူတစ်ဆိုင်ထဲပဲ စာအုပ်တင်ထားလို့
ဘိန်းရဲ့ ပထမဆုံးမအောင်မြင်လိုက်တဲ့ ပင်နယ်တီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးဇဝန ဘုရား။
စင်္ကာပူမှာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခ ရပါပြီ
၁၀ နှစ်ဆိုရင် "တောင်" ရွေ့တယ်